Ko Thant – Page2– Myanmar Forex Villa
iPhone Web Development on ယနေ့ရွှေဈေး ငွေဈေး
Krystle Bernacchi on AUDUSD(DAILY)
Fidelia on Prices at Asia Market Section
Author: Ko Thant
မိမိ trading styleပေါ်မူတည်ပြီး Rules & Regulations တွေချမှတ်ကြရအောင်
ဒီ post လေးကိုတော့ မိမိကိုယ်ပိုင် rules လေးတွေ ချမှတ်နိုင်ဖို့အတွက် အောင်မြင်ပီးသား traderအသိုင်းအဝိုင်းကသူတွေ ချမှတ် ထားတဲ့ သူတို့ရဲ့rulesတွေကို လေ့လာပီး တစိတ်တဒေသအားဖြင့် ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပီး မျှဝေလိုက်ရပါတယ်။
Rule 1 : AlwaysaTrading Plan
တော်တော်များများတော့”Plan your trade, trade your plan” ဆိုတဲ့ ဒီဆောင်ပုဒ်လေးကို ကြားဖူးပြီးသားဖြစ်ကြမှာပါ။ trading plan ဆိုတာ education+management လို့ ကျွန်မ ထင်မြင်မိပါတယ်။ ကျွန်မတို့အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်မှုတွေအတွက် မိမိတို့ဝင်သင့်တဲ့ entry point, exit pointတွေက အရေးကြီးတဲ့အပြင် money management ရှိနေဖို့ကလည်း အရေးပါလှတဲ့ အကြောင်းအရာ တခုဖြစ်လို့နေပါတယ်။
Rule2: Treat Trading LikeaBusiness
Trading လုပ်ငန်းမှာ professional ဖြစ်ဖို့ ဦးတည်ရာမှာ မိမိလုပ်ငန်းအပေါ် မိမိကိုယ်တိုင်ထားရှိရမဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားတွေကလည်း အင်မတန်အရေးကြီးလို့နေပြန်ပါတယ်။ ဝါသနာပါရုံလောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ မိမိရဲ့ own business လို့ သဘောထားပြီး မိမိ business အတွက် တိကျပီး သတ်သတ်မှတ်မှတ်နဲ့ အချိန်တခုပေးကာ ဖိဖိစီးစီး လုပ်ကိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Rule3: Use Technology to Your Advantage
Trading လုပ်ငန်းဟာ ခုအခါမှာ competitive businessတစ်ခု ဖြစ်လို့လာနေပါပီ။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာတွေကို အကျိုးရှိဖို့ရာ အသုံးချနိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေလည်း အင်မတန်ပေါများလာပါပြီ။ ဥပမာ-Backtesting ဆိုပါစို့။ historyတွေ လေ့လာရင်း မိမိရဲ့trading performanceကို ဆန်းစစ်နိုင်ပါပြီ။
Rule4: Protect your Trading Capital
Trader တိုင်းမှာ losing tradesတွေ ရှိဖူးကြတယ် ရှိနေကြမှာပါပဲ။ မထူးဆန်းလှပါဘူးး မရင်ဆိုင်နိုင်စရာလည်း မရှိပါဘူးး။ Business လေ Risk and Reward ရှိနေမှာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဆိုလိုချင်တာက မလိုလားအပ်တဲ့ မဆုံးရှုံးသင့်တဲ့ ကိုယ့်capitalကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့တော့ လိုအပ်တာပေါ့။
Rule5: BecomeaStudent of the Market
ဒီ tip လေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ မိမိလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ educationတခုရှိနေဖို့က စပြောရမှာပေါ့။ Fundamental ကျွမ်းကျင် သူတွေကလည်း ဘယ်politicsတွေ eventsတွေ economics တွေက market ကို ဘယ်လိုချိန်မှာ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိ impact ဖြစ်တတ်တယ်။ Technical သမားတွေကလည်း ဘယ်ဈေးလောက်မှာဆို trendline ကို test လုပ်တတ်တယ် ဘယ်လို Support, Resistance တွေကတော့ ဘယ်လောက်ထိ strong ဖြစ်တယ် buyer တွေ seller တွေရဲ့ဘယ်လို pyscology တွေကြောင့် market ကိုဘယ်လို affect ဖြစ်တတ်တယ် စသဖြင့် စသဖြင့်ပေါ့။ အဓိကဆိုလိုချင်တာက market ထဲကနေ အမြဲသင်ယူပါ မပြတ်လေ့ ကျင့်ယူဖို့ပါပဲ။
Rule6: Risk only What You can Afford to Lose
ဒီ rule ကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ Risk and Reward သဘောတရားကို တလွဲစပင်နားလည်ထားသူတွေရဲ့ မတော်လောဘကြောင့် Risk ယူတယ်ကွာဆိုတာမျိုးပေါ့။ အဲ့ Risk ကို တကယ့်တကယ်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာ ခံနိုင်ရည်မရှိတတ်ကြပါဘူးး။ ဒါကြောင့် မိမိနိုင်နင်းတဲ့ risk တခုကိုသာ ယူစေချင်ပါတယ်။
Rule7: DevelopaTrading Methodology Based on Facts
ဒီruleအတွက် ဥပမာလေး ပေးပါရစေ။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ career တစ်ခုနဲ့ stand alone ဖြစ်ဖို့အတွက် university or college တခုခုမှာ ၄,၅နှစ်ထက်မနည်း သင်ယူရတယ်။ အိုခေ အဲ့လို သင်ယူပြီးစီးသွားတော့ရော ကျွန်မတို့ ရပ်တည်နိုင်ပီလား ကြိုးစားရုန်းကန်ယူရပါသေးတယ်။ အဲ့တော့ ကျွန်မတို trading လုပ်ငန်းနဲ့ရပ်တည်မယ်ဆိုရင်ရော ဘယ်လောက်ထိ သင်ယူပီးပီလဲ သင်ယူဖို့လိုအပ်လဲ စဉ်းစားလို့ရမယ် ထင်ပါတယ်။
Rule 8 : Always UseaStop Loss
Demo accountမှာ SL မထားဘူး ကိစ္စမရှိလှပါဘူး။ စောင့်လို့ရမှာရော မြတ်မှ exit လုပ်မှာလေ။ no emotion ပေါ့ သာသာယာယာပဲ။ ဒါပေမဲ့ မိမိ live accountမှာ ဆုံးရှုံးမှုပြနေတဲ့ floating ကို စိတ်တည်ငြိမ်စွာနဲ့ ကြည့်နေနိုင်ဖို့က လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ မိမိ transaction တိုင်း မှန်နေတာ မဖြစ်နိုင်သလို မှားနေဖို့လည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မိမိ decision မှားခဲ့ပီဆိုရင်တောင် stop loss ထားရှိထားမယ်ဆိုရင် မလိုလားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေအပြင် စိတ်ဖိစီးမှုတွေလည်း ကင်းဝေးပါလိမ့်မယ်။
အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ကတော့ ဒီ trading rules တွေကို လေ့လာပီး မိမိရဲ့trading business မှာ ဘယ်လိုပေါင်းစပ်ပီး အသုံးချနိုင်မလဲဆိုတဲ့ way တခုလောက်တော့ ရကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ကဲ ဒီတော့ အမြန်ဆုံး မိမိ trading style နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ rules and regulations တွေကို ချမှတ်နိုင်ကြပါစေ။ ချမှတ်ထားတဲ့အတိုင်း မဖောက်မဖြတ်လုပ်ဆောင်နိ်ုင်ကြပီး profit တွေ တပွေ့တပိုက်နဲ့ Trader ကြီးတွေ အမြန်ဆုံးဖြစ်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Be all Profitable Traders!!!
ဒီ post လေးကိုတော့ မိမိကိုယျပိုငျ rules လေးတှေ ခမြှတျနိုငျဖို့အတှကျ အောငျမွငျပီးသား traderအသိုငျးအဝိုငျးကသူတှေ ခမြှတျ ထားတဲ့ သူတို့ရဲ့rulesတှကေို လလေ့ာပီး တစိတျတဒသေအားဖွငျ့ ကူညီထောကျပံ့ပေးနိုငျမယျလို့မြှျောလငျ့ပီး မြှဝလေိုကျရပါတယျ။
တျောတျောမြားမြားတော့”Plan your trade, trade your plan” ဆိုတဲ့ ဒီဆောငျပုဒျလေးကို ကွားဖူးပွီးသားဖွဈကွမှာပါ။ trading plan ဆိုတာ education+management လို့ ကြှနျမ ထငျမွငျမိပါတယျ။ ကြှနျမတို့အရောငျးအဝယျပွုလုပျမှုတှအေတှကျ မိမိတို့ဝငျသငျ့တဲ့ entry point, exit pointတှကေ အရေးကွီးတဲ့အပွငျ money management ရှိနဖေို့ကလညျး အရေးပါလှတဲ့ အကွောငျးအရာ တခုဖွဈလို့နပေါတယျ။
Trading လုပျငနျးမှာ professional ဖွဈဖို့ ဦးတညျရာမှာ မိမိလုပျငနျးအပျေါ မိမိကိုယျတိုငျထားရှိရမဲ့ စိတျနစေိတျထားတှကေလညျး အငျမတနျအရေးကွီးလို့နပွေနျပါတယျ။ ဝါသနာပါရုံလောကျမဟုတျဘဲနဲ့ မိမိရဲ့ own business လို့ သဘောထားပွီး မိမိ business အတှကျ တိကပြီး သတျသတျမှတျမှတျနဲ့ အခြိနျတခုပေးကာ ဖိဖိစီးစီး လုပျကိုငျဖို့ လိုအပျပါတယျ။
Trading လုပျငနျးဟာ ခုအခါမှာ competitive businessတဈခု ဖွဈလို့လာနပေါပီ။ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာတဲ့ နညျးပညာတှကေို အကြိုးရှိဖို့ရာ အသုံးခနြိုငျမဲ့အခှငျ့အလမျးတှလေညျး အငျမတနျပေါမြားလာပါပွီ။ ဥပမာ-Backtesting ဆိုပါစို့။ historyတှေ လလေ့ာရငျး မိမိရဲ့trading performanceကို ဆနျးစဈနိုငျပါပွီ။
Trader တိုငျးမှာ losing tradesတှေ ရှိဖူးကွတယျ ရှိနကွေမှာပါပဲ။ မထူးဆနျးလှပါဘူးး မရငျဆိုငျနိုငျစရာလညျး မရှိပါဘူးး။ Business လေ Risk and Reward ရှိနမှောပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ဆိုလိုခငျြတာက မလိုလားအပျတဲ့ မဆုံးရှုံးသငျ့တဲ့ ကိုယျ့capitalကို ကာကှယျနိုငျဖို့တော့ လိုအပျတာပေါ့။
ဒီ tip လေးပွောမယျဆိုရငျတော့ မိမိလုပျငနျးနဲ့ပတျသတျတဲ့ educationတခုရှိနဖေို့က စပွောရမှာပေါ့။ Fundamental ကြှမျးကငျြ သူတှကေလညျး ဘယျpoliticsတှေ eventsတှေ economics တှကေ market ကို ဘယျလိုခြိနျမှာ ဘယျလောကျအတိုငျးအတာထိ impact ဖွဈတတျတယျ။ Technical သမားတှကေလညျး ဘယျဈေးလောကျမှာဆို trendline ကို test လုပျတတျတယျ ဘယျလို Support, Resistance တှကေတော့ ဘယျလောကျထိ strong ဖွဈတယျ buyer တှေ seller တှရေဲ့ဘယျလို pyscology တှကွေောငျ့ market ကိုဘယျလို affect ဖွဈတတျတယျ စသဖွငျ့ စသဖွငျ့ပေါ့။ အဓိကဆိုလိုခငျြတာက market ထဲကနေ အမွဲသငျယူပါ မပွတျလေ့ ကငျြ့ယူဖို့ပါပဲ။
ဒီ rule ကတော့ ရိုးရှငျးပါတယျ။ Risk and Reward သဘောတရားကို တလှဲစပငျနားလညျထားသူတှရေဲ့ မတျောလောဘကွောငျ့ Risk ယူတယျကှာဆိုတာမြိုးပေါ့။ အဲ့ Risk ကို တကယျ့တကယျရငျဆိုငျရတဲ့အခါမှာ ခံနိုငျရညျမရှိတတျကွပါဘူးး။ ဒါကွောငျ့ မိမိနိုငျနငျးတဲ့ risk တခုကိုသာ ယူစခေငျြပါတယျ။
ဒီruleအတှကျ ဥပမာလေး ပေးပါရစေ။ ကြှနျမတို့နိုငျငံအနနေဲ့ career တဈခုနဲ့ stand alone ဖွဈဖို့အတှကျ university or college တခုခုမှာ ၄,၅နှဈထကျမနညျး သငျယူရတယျ။ အိုခေ အဲ့လို သငျယူပွီးစီးသှားတော့ရော ကြှနျမတို့ ရပျတညျနိုငျပီလား ကွိုးစားရုနျးကနျယူရပါသေးတယျ။ အဲ့တော့ ကြှနျမတို trading လုပျငနျးနဲ့ရပျတညျမယျဆိုရငျရော ဘယျလောကျထိ သငျယူပီးပီလဲ သငျယူဖို့လိုအပျလဲ စဉျးစားလို့ရမယျ ထငျပါတယျ။
Demo accountမှာ SL မထားဘူး ကိစ်စမရှိလှပါဘူး။ စောငျ့လို့ရမှာရော မွတျမှ exit လုပျမှာလေ။ no emotion ပေါ့ သာသာယာယာပဲ။ ဒါပမေဲ့ မိမိ live accountမှာ ဆုံးရှုံးမှုပွနတေဲ့ floating ကို စိတျတညျငွိမျစှာနဲ့ ကွညျ့နနေိုငျဖို့က လှယျတဲ့ကိစ်စမဟုတျပါဘူး။ မိမိ transaction တိုငျး မှနျနတော မဖွဈနိုငျသလို မှားနဖေို့လညျး မဖွဈနိုငျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ မိမိ decision မှားခဲ့ပီဆိုရငျတောငျ stop loss ထားရှိထားမယျဆိုရငျ မလိုလားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတှအေပွငျ စိတျဖိစီးမှုတှလေညျး ကငျးဝေးပါလိမျ့မယျ။
အနှဈခြုပျအနနေဲ့ကတော့ ဒီ trading rules တှကေို လလေ့ာပီး မိမိရဲ့trading business မှာ ဘယျလိုပေါငျးစပျပီး အသုံးခနြိုငျမလဲဆိုတဲ့ way တခုလောကျတော့ ရကွလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့မိပါတယျ။ ကဲ ဒီတော့ အမွနျဆုံး မိမိ trading style နဲ့ကိုကျညီတဲ့ rules and regulations တှကေို ခမြှတျနိုငျကွပါစေ။ ခမြှတျထားတဲ့အတိုငျး မဖောကျမဖွတျလုပျဆောငျနိုငျကွပီး profit တှေ တပှတေ့ပိုကျနဲ့ Trader ကွီးတှေ အမွနျဆုံးဖွဈကွပါစလေို့ ဆုတောငျးလိုကျပါတယျ။
Posted on January 7, 2018 Categories Forex Lesson619 Comments on မိမိ trading styleပေါ်မူတည်ပြီး Rules & Regulations တွေချမှတ်ကြရအောင်
CRB Commondity Index ဆိုတာနဲ့ ရွှေ..။
ကနေဒါ အခြေစိုက် Thomsom Reuters Corp. ရဲ့ကုန်စည်ဈေးနုန်း စစ်တမ်းအဖွဲ့ Commodity Research Bureau ( CRB )က ထုတ်ပြန်တဲ့ ကုန်စည်ဈေးနုန်းအညွှန်းဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်၊အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ နှစ်စဉ် ထုတ်ပြန်လေ့ရှိသလို ကမ္ဘာ့ကုန်ဈေးများကို ထုတ်ပြန်တဲ့ပထမဆုံးအဖွဲ့အစည်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့ U.S economic data များရဲ့ ခန့်မှန်း Consensus ကို ထုတ်ပြန်ပေးတာလည်း ဒီအဖွဲ့အစည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံ(1) 2010 ကနေ 2017 အတွင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ CRB Index Chart ပါ။ April.2011 မှာ ဒီ index ဟာ သမိုင်းတစ်လျှေက် အမြင့်ဆုံးရောက် ခဲ့သလို စက်တင်ဘာမှာ ရွှေဈေးဟာ $1920 ကျော်နဲ့ သမိုင်းတလျှေ က်အမြင့်ဆုံးကို ရောက်ပါတယ်။ February.2016 မှာ CRB Index ဟာ အနိမ့်ဆုံးပြန်ရောက်တာတွေ့ရဖို့ရှိသလို ထို့အတူ ဒီမတိုင်ခင် သုံးလအလိုမှာ ရွှေဟာ $1055 ဝန်းကျင်နဲ့ အနိမ့်ဆုံးကို ပြန်ကျ ပါတယ်။
ကုန်ဈေးနှုန်း၊ ငွေဖောင်းပွမှုနဲ့ရွှေဈေးဟာ ဆက်စပ်ပြောင်းလဲကြတာကို ဆိုလိုပါတယ်။
ပုံ(2) 2017 ရဲ့ ရေနံနဲ့ဆက်စပ်ကုန်စည်များရဲ့ဈေးနှုန်းပါ။ ရေနံစိမ်းဈေးဟာ 2015 ခု မတ်လနောက်ပိုင်း သုံးနှစ်နီးပါးမှာ အမြင့်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံ(3)စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး သတ္တု တွင်းထွက်များရဲ့ဈေးနှုန်းပါ။ ပျမ်းမျှ 30% ခန့် အတက်ပြခဲ့ကြပြီး အထူးသဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများရဲ့ တိုးတက်မှုကို တိုင်းတာတဲ့ ကြေး Copper ဈေးဟာ လေးနှစ်နီးပါးအတွင်းအမြင့်ဆုံးလို့ ဆိုပါတယ်။
ပုံ(4) လယ်ယာထွက်ကုန်စည်များရဲ့ဈေးနှုန်းပါ။ 2017 မှာ အားလုံးနီးပါးအကျ ပြတာ တွေ့ရသလို ဆန် Rice တစ်မျိူးပဲ ထူးထူးခြားခြား အတက်ပြပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ တရုတ်ကုန်သည်များဟာ ဆန်ရှားလို့ မဟုတ်ပဲ။ ဈေးကောင်းလို့ မြန်မာလယ်မြေ ထဲအရောက် ဝင်ရောက်ဝယ် ယူခဲ့တာပါ။ မှတ်သားဖွယ်ပါ။
ပုံ(5) Dec.5 တုန်းက Jeffrey Gundlach ရဲ့ ဟောကိန်းပါ။သမိုင်းကြောင်းအရကော။ လက်ရှိကမ္ဘာ့ စီးပွားရေးအရကော 2017 မှာ ရွှေနဲ့ ကုန်စည်ဈေးနုန်းတွေ တက်ဖို့ရှိတဲ့ အတွက် ဝယ်ထားကြဖို့နဲ့ မြင့်နေတဲ့ ရှယ်ယာတွေကို မချစ်ကြဖို့ သူက ပြောခဲ့တာပါ။
ဒါကတော့ CRB Commodity Index နဲ့ရွှေရဲ့ဆက်စပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ကနဒေါ အခွစေိုကျ Thomsom Reuters Corp. ရဲ့ကုနျစညျဈေးနုနျး စဈတမျးအဖှဲ့ Commodity Research Bureau ( CRB )က ထုတျပွနျတဲ့ ကုနျစညျဈေးနုနျးအညှနျးဖွဈပါတယျ။ နစေ့ဉျ၊အပတျစဉျ၊ လစဉျ၊ နှဈစဉျ ထုတျပွနျလရှေိ့သလို ကမ်ဘာ့ကုနျဈေးမြားကို ထုတျပွနျတဲ့ပထမဆုံးအဖှဲ့အစညျးလညျး ဖွဈပါတယျ။ဒီကနကြေှ့နျတျောတို့ကွညျ့နတေဲ့ U.S economic data မြားရဲ့ ခနျ့မှနျး Consensus ကို ထုတျပွနျပေးတာလညျး ဒီအဖှဲ့အစညျးပဲ ဖွဈပါတယျ။
ပုံ(1) 2010 ကနေ 2017 အတှငျးဖွဈခဲ့တဲ့ CRB Index Chart ပါ။ April.2011 မှာ ဒီ index ဟာ သမိုငျးတဈလြှေကျ အမွငျ့ဆုံးရောကျ ခဲ့သလို စကျတငျဘာမှာ ရှဈေေးဟာ $1920 ကြျောနဲ့ သမိုငျးတလြှေ ကျအမွငျ့ဆုံးကို ရောကျပါတယျ။ February.2016 မှာ CRB Index ဟာ အနိမျ့ဆုံးပွနျရောကျတာတှရေ့ဖို့ရှိသလို ထို့အတူ ဒီမတိုငျခငျ သုံးလအလိုမှာ ရှဟော $1055 ဝနျးကငျြနဲ့ အနိမျ့ဆုံးကို ပွနျကြ ပါတယျ။
ကုနျဈေးနှုနျး၊ ငှဖေောငျးပှမှုနဲ့ရှဈေေးဟာ ဆကျစပျပွောငျးလဲကွတာကို ဆိုလိုပါတယျ။
Posted on January 7, 2018 Categories ဆောင်းပါး5 Comments on CRB Commondity Index ဆိုတာနဲ့ ရွှေ..။
ငွေ စီမံကိန်း အပိုင်း (၁)
အလုပ်​လုပ်​သက်​လည်း ကြာလာပြီဆို​တော့ ခု​နောက်​ပိုင်း လုပ်​ငန်းပိုကျွမ်းကျင်​ပြီး ၀င်​​ငွေ ပိုကောင်းလာကြတယ်​​။ ​စားဝတ်​​နေ​ရေးလည်း အ​ဆင်​​ပြေ ၊ ၀င်​​ငွေ​ကောင်းတဲ့အလုပ်​ကိုယ်​စီနဲ့ဆို​တော့ ​မျှော်​လင့်​ချက်​​တွေ ပြည့်​လုပြည့်​ကာနီးပါပဲ။ စိတ်​ကူးယဉ်​ထားသလို …..။ မင်္ဂလာ​ဆောင်​ကို အခမ်းနားဆုံးဖြစ်​​အောင်​ စီစဉ်​ကြတယ်​။ တစ်​သက်​မှာတစ်​ခါ​ပဲ ကျင်းပရတဲ့ ပွဲဆို​တော့​လေ …..
အိမ်​​ထောင်​ဦးအစမှာ​တော့ တိုက်ခန်းငှားနေပြီး နှစ်ယောက်ဝင်ငွေထဲကနေ – ငွေများများစုရင်း အိမ်လေးတစ်လုံးဝယ်ဖို့ တိုင်​ပင်​ကြတယ်​။ ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးတစ်လုံးဝယ်ပြီးရင်​​တော့ သားသမီး​တွေလဲ ရ ၊ အေး​အေးချမ်းချမ်း သာသာယာယာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နဲ့ မိသားစုဘ၀ပိုင်​ ဆိုင်​ပြီ။ အဲဒါ​ကြောင့်​ လင်​မယားနှစ်​​ယောက်​လုံး အလုပ်ကို ပို ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်ကြတယ်​။ တဖြေးဖြေး .. အလုပ်အကိုင် ပိုအဆင်ပြေ လာပြီး ၀င်ငွေလည်း ပိုတိုးလာတယ်။ တော်တော်လေး စုမိဆောင်းမိဖြစ်လာတော့ ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးတစ်လုံး ၀ယ်လိုက်ကြတယ်။ စိတ်ကူးလေးတွေ အကောင်အထည်ပေါ်လာ​လေပြီ။ အသုံးအဆောင်​အသစ်​တွေဝယ်​ ၊ ​ဆေး​ရောင်​လှလှ​လေးသုတ်​ပြီး ၊ ​ခေတ်​ မီပရိ​ဘောဂ​တွေနဲ့ ခန့်​ညား​နေတဲ့အိမ်​​သစ်​လေးရဲ့နာမည်​က “မေတ္တာရိပ်​မြုံ ” တဲ့။ အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ​တွေ ၊ ကောင်းသထက်ကောင်း တဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ အိမ်​​လေးရဲ့ တန်​ဘိုးကို ပ်ိုမြှင့်ကြတယ်။ ​မေတ္တာရိပ်​မြုံ​လေးဟာ ခေတ်​မီဆန်းသစ်​​​တောက်​ပပြီး ရပ်​ကွက်​ထဲက အလှဆုံးအိမ်​​လေးပါပဲ။ သိပ်​မကြာခင်​မှာပဲ ​မေတ္တာရိပ်​မြုံ​ကမ္ဘာလေးမှာ က​လေး​လေးလူသစ်​​လေးတစ်​​ယောက်​ ​​လောကသစ်​ထဲရောက်​လာတယ်​။ ​နွေး​ထွေးလုံခြုံတဲ့အိမ်​​လေးရယ်​ ၊ ချစ်​ခြင်း​မေတ္တာ​တွေရယ်​ ၊ ပြည့်​စုံခြင်း​တွေရယ်​ သိပ်​သာယာတဲ့ကမ္ဘာ​လေးပါပဲ။ အ​ဖေလုပ်​သူက သူ့မိသားစုအတွက်​ ကိုယ်​ပိုင်​ကားတစ်​စီး ၀ယ်​လာ​ပေးတယ်​။ လက်​ထဲမှာ ​ငွေများများစားစားမရှိ​တော့ အရစ်​ကျစနစ်​နဲ့ ၀ယ်​ခဲ့တယ်​။
ဒီလိုနဲ့ …….မိသားစု ပျော်ပျော်ပါးပါး မြန်မာပြည်အနှံ့ လျောက်လည်ကြတာပေါ့။ သူတို့ သတိထားမိတဲ့အချိန်မှာ ……။ အိမ်သုံးစရိတ် ၊ နေစရိတ် ၊ က​လေးစရိတ်​ ၊ ပေးဖို့အကြွေး ၊ ကားစရိတ် နဲ့ လစဉ်ရေခွန်​မီးခွန်​ဖုန်းခွန်​​တွေ တန်းစီနေတယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်ကို အရင်ကထက် ပိုကြိုးစားလုပ်ကိုင်ကြတယ်။ အ​ဖေလုပ်​သူက ၀င်​​ငွေပိုရဖို့ ကိုယ်​ပိုင်​စီးပွား​ရေးတစ်​ခု စ,လုပ်​တယ်​။ ၀င်ငွေ နဲ့ လစဉ်​ ထွက်​​ငွေက မလောက်ငှနိုင်ပဲ အမြဲတမ်း လိုငွေပဲ ပြပြလာတယ်။ အ​ဖေလုပ်​သူရဲ့ စီးပွား​ရေးကလည်း ​ငွေ ထပ်​ထပ်​ထည့်​ရတယ်​။ ကလေးစရိတ် ၊ အသုံးစရိတ် နဲ့ ၀ယ်ထားတဲ့ အရစ်ကျပေးဖို့​ငွေတွေကလည်း လစဉ်ပေးနေရတယ်။ က​လေးအ​မေဟာ အိမ်​မှုကိစ္စ၊ က​လေး​ဝေယျာဝစ္စ​တွေအပြင်​ ၀င်​​ငွေရမယ့်​အလုပ်​လည်း လုပ်ရတယ်​။ ကလေးကိုလည်း ကြည့်​ရှု​စောင့်​​ရှောက်​ရတယ်။ ​ဆွေမျိုးမိဘ ကိုလည်း ပြန်​မ​ထောက်​ပံ့နိုင် ၊ အလှူအတန်းလုပ်ဖို့ နဲ့ ​ဆေးဖိုးဝါးခကြိုစုဖို့ဆိုတာ ​အ​တွေးသက်​သက်​ပဲ ရှိ​တော့တယ်​။ မိဘမဲ့ဂေဟာမှာ လှူဖို့ ၊ ဆေးရုံ, စာသင်ခန်းမှာ လှူဖို့ဆိုတာ သူတို့နဲ့ လုံးလုံးမသက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေ ဖြစ်နေပြီ။ လှူတန်းဖို့ နေနေသာသာ လစဉ်ဝင်ငွေဟာ အိမ်သုံးစရိတ် ၊ ကလေးစရိတ် ၊ ကားစရိတ် ၊ ၀တ်​ဖို့စားဖို့ နဲ့ လတိုင်းပေးရမယ့်အခွန်တွေအတွက် မလောက်နိုင်ဘူး။ နားလည်းမနား ရဲကြဘူး။ လူရပ်တာနဲ့ ၀င်ငွေလည်း ရပ်မယ်။ ပေးဖို့ကျန်တဲ့ငွေတွေရယ် ၊ နေစရိတ်စားစရိတ်ရယ် ၊ တာဝန်တွေပိုပိလာတာရယ် ၊ အလုပ် အကိုင် အဆင်မပြေမှာစိုးတဲ့စိတ်ရယ် ၊ ၀င်ငွေပိုရချင်တာရယ် .. ကြားထဲမှာ စိုးရိမ်ပူပန်ရတာ များသထက်များပြီး အေးချမ်းသာယာမှု ဆိုတာ တဖြေးဖြေး ပျောက်လာခဲ့တယ်။ ​မေတ္တာရိပ်​မြုံ​လေး တိတ်​ဆိတ်​ခြောက်​ကပ်​လာခဲ့တယ်​။ လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးဟာ အလုပ်ကောင်းကောင်း ရှိကြတယ်။ ၀င်ငွေကောင်းကောင်းလည်း ရှိကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ငွေကြေးအခက်အခဲတွေကြားမှာ ပိတ်မိပြီး ပူပန်သောကများနေရတယ်။ ချမ်းသာတဲ့ဘ၀ ငွေကြေးမပူပင်ရတဲ့ဘ၀ ရောက်ဖို့ လမ်းပျောက်နေခဲ့ရတယ်။ ​ငွေ​ကြေးပြဿနာဟာ တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀ထဲက မိသားစုနီးပါးတိုင်းမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာပါ။
ကျွန်မတို့ အားလုံးနီးပါးဟာ အခြေခံပညာရေးဖြစ်တဲ့ ကျောင်းသင်ပညာရေး သင်ရတယ်။ ပြီးရင် ရှင်သန်နေထိုင်အသက်မွေးဖို့အတွက် ငွေရအောင် အသုံးချဖို့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာ သင်ရတယ်။ ဆရာဝန် ၊ အင်ဂျင်နီယာ ၊ ပန်းချီ ၊ အဆိုတော် ၊ သရုပ်ဆောင် ၊ စီးပွားရေးပညာ ၊ စာရင်းအင်းပညာ ၊ ရှေ့နေ ၊ ကျောင်းဆရာ ၊ စာရေးဆရာ … စတဲ့ ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အလိုက်​ ၀င်​​ငွေရှာ အသက်မွေး ကြတယ်။ ဒီ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာဟာ ၀င်ငွေရှာပေးတဲ့ ပညာပါပဲ ……။ ဒါကြောင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာကျွမ်းကျင်လေ ကျွန်မတို့ ၀င်ငွေ ပိုရလေ ပါပဲ။ ၀င်ငွေ ပိုရလေ ချမ်းသာ လေပေါ့။ ဒါ ကျွန်မတို့ သိထားတဲ့ လမ်းမှန်တဲ့ ဘ၀နေနည်း ပါ။ ဘယ်သူမဆို အလုပ်ကြိုးစားလုပ်ရမယ်၊ ၀င်ငွေများများရအောင် ရှာရမယ်၊ ၀င်ငွေ များသထက်များလာပြီဆိုရင် ချမ်းသာလာမယ်။ ကျွန်​မတို့ ဒီလို ထင်​ထားကြတယ်။
တစ်ကယ်တော့ …… တစ်ကယ့်အမှန်တော့ အဲဒီလို မဟုတ်ဘူး။ ၀င်ငွေများများရှာနိုင်လေ ချမ်းသာလေဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ငွေက မိတ်ဆွေတို့ ကျွန်မတို့ကို ချမ်းသာအောင် လုပ်မပေးနိုင်ပါဘူး။ ငွေက ချမ်းသာအောင် လုပ်မပေးနိုင်ပါဘူး။ ချမ်းသာဖို့ဆိုတာ ငွေကြေး အတတ် ပညာ ကျွမ်းကျင်မှသာလျင် ချမ်းသာနိုင်မှာပါ။ အပေါ်က အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီး လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်း ပညာကျွမ်းကျင်ပါရက် ၊ ၀င်ငွေလည်းကောင်းပါရက် နဲ့ ငွေကြေးအခက်အခဲကြားမှာ လှောင်ပိတ်ခံရပြီး ပူပင်ကြောင့်ကြ ဘ၀ထဲ ရောက်သွားရတာ သူတို့မှာရှိတဲ့ငွေကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် မစီမံတတ်လို့ပါပဲ။ သူတို့မှာရှိတဲ့ ငွေကို ပွားများအောင် ၊ ငွေပေါ်ငွေ ထပ်ပေါ်အောင် လုပ်တဲ့ ငွေကြေးအသိပညာ မရှိတဲ့အတွက် ငွေပြဿနာတွေ ဖြစ်လာတော့တာပါပဲ။ ငွေကြေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေကို မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခါ နောက်ဆက်တွဲရလာဒ်က ဆင်းရဲခြင်းပါ။
ဒါကြောင့် …… ချမ်းသာချင်တယ်ဆိုရင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာတတ်ရုံ ၊ ၀င်ငွေများများရရုံ နဲ့ ချမ်းသာတဲ့သူ ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။ ကိုယ့်ဝင်ငွေကို ပွားသထက်ပွားများအောင် ၊ ဆုံးရှုံးမှုနည်းအောင် လုပ်ဆောင်တတ်ဖို့ စီမံတတ်ဖို့ ငွေကြေးအသိပညာရှိမှသာ ချမ်းသာဖို့ လမ်းစပေါ်ရောက်မှာပါ။
၀င်​​ငွေပွားသထက်​ပွားများ​အောင်​ ၊ ဆုံးရှုံးမှုနည်း​အောင်​ စီမံတတ်​ဖို့ “ငွေကြေးဆိုင်ရာအသိပညာ” အကြောင်း – အပိုင်း (၂) မှာ ဆက်ပါမယ်ရှင်​ …….
ချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံး နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ကျန်းမာပါစေ။
စီးပွားရေး ပိုတိုးတက်အောင်မြင်ပြီး ကြီးပွားချမ်းသာသူများ ဖြစ်ကြပါစေ။
ယခု – “ငွေ စီမံကိန်း” ဆောင်းပါးဟာ ချစ်မိတ်ဆွေတို့အတွက် နှစ်သစ်လက်ဆောင်ပါ။ အပိုင်း (၂) ဆက်ပါမယ်နော်။
အလုပျလုပျသကျလညျး ကွာလာပွီဆိုတော့ ခုနောကျပိုငျး လုပျငနျးပိုကြှမျးကငျြပွီး ဝငျငှေ ပိုကောငျးလာကွတယျ။ စားဝတျနရေေးလညျး အဆငျပွေ ၊ ဝငျငှကေောငျးတဲ့အလုပျကိုယျစီနဲ့ဆိုတော့ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ ပွညျ့လုပွညျ့ကာနီးပါပဲ။ စိတျကူးယဉျထားသလို …..။ မင်ျဂလာဆောငျကို အခမျးနားဆုံးဖွဈအောငျ စီစဉျကွတယျ။ တဈသကျမှာတဈခါပဲ ကငျြးပရတဲ့ ပှဲဆိုတော့လေ …..
အိမျထောငျဦးအစမှာတော့ တိုကျခနျးငှားနပွေီး နှဈယောကျဝငျငှထေဲကနေ – ငှမြေားမြားစုရငျး အိမျလေးတဈလုံးဝယျဖို့ တိုငျပငျကွတယျ။ ကိုယျပိုငျအိမျလေးတဈလုံးဝယျပွီးရငျတော့ သားသမီးတှလေဲ ရ ၊ အေးအေးခမျြးခမျြး သာသာယာယာ ပြျောပြျောရှငျရှငျ နဲ့ မိသားစုဘဝပိုငျ ဆိုငျပွီ။ အဲဒါကွောငျ့ လငျမယားနှဈယောကျလုံး အလုပျကို ပို ကွိုးကွိုးစားစား လုပျကွတယျ။ တဖွေးဖွေး .. အလုပျအကိုငျ ပိုအဆငျပွေ လာပွီး ဝငျငှလေညျး ပိုတိုးလာတယျ။ တျောတျောလေး စုမိဆောငျးမိဖွဈလာတော့ ကိုယျပိုငျအိမျလေးတဈလုံး ဝယျလိုကျကွတယျ။ စိတျကူးလေးတှေ အကောငျအထညျပျေါလာလပွေီ။ အသုံးအဆောငျအသဈတှဝေယျ ၊ ဆေးရောငျလှလှလေးသုတျပွီး ၊ ခတျေ မီပရိဘောဂတှနေဲ့ ခနျ့ညားနတေဲ့အိမျသဈလေးရဲ့နာမညျက “မတ်ေတာရိပျမွုံ ” တဲ့။ အိမျထောငျပရိဘောဂတှေ ၊ ကောငျးသထကျကောငျး တဲ့ အသုံးအဆောငျပစ်စညျးတှနေဲ့ အိမျလေးရဲ့ တနျဘိုးကို ပိုမွှငျ့ကွတယျ။ မတ်ေတာရိပျမွုံလေးဟာ ခတျေမီဆနျးသဈတောကျပပွီး ရပျကှကျထဲက အလှဆုံးအိမျလေးပါပဲ။ သိပျမကွာခငျမှာပဲ မတ်ေတာရိပျမွုံကမ်ဘာလေးမှာ ကလေးလေးလူသဈလေးတဈယောကျ လောကသဈထဲရောကျလာတယျ။ နှေးထှေးလုံခွုံတဲ့အိမျလေးရယျ ၊ ခဈြခွငျးမတ်ေတာတှရေယျ ၊ ပွညျ့စုံခွငျးတှရေယျ သိပျသာယာတဲ့ကမ်ဘာလေးပါပဲ။ အဖလေုပျသူက သူ့မိသားစုအတှကျ ကိုယျပိုငျကားတဈစီး ဝယျလာပေးတယျ။ လကျထဲမှာ ငှမြေားမြားစားစားမရှိတော့ အရဈကစြနဈနဲ့ ဝယျခဲ့တယျ။
ဒီလိုနဲ့ …….မိသားစု ပြျောပြျောပါးပါး မွနျမာပွညျအနှံ့ လြောကျလညျကွတာပေါ့။ သူတို့ သတိထားမိတဲ့အခြိနျမှာ ……။ အိမျသုံးစရိတျ ၊ နစေရိတျ ၊ ကလေးစရိတျ ၊ ပေးဖို့အကွှေး ၊ ကားစရိတျ နဲ့ လစဉျရခှေနျမီးခှနျဖုနျးခှနျတှေ တနျးစီနတေယျ။ ဒါကွောငျ့ အလုပျကို အရငျကထကျ ပိုကွိုးစားလုပျကိုငျကွတယျ။ အဖလေုပျသူက ဝငျငှပေိုရဖို့ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးတဈခု စ,လုပျတယျ။ ဝငျငှေ နဲ့ လစဉျ ထှကျငှကေ မလောကျငှနိုငျပဲ အမွဲတမျး လိုငှပေဲ ပွပွလာတယျ။ အဖလေုပျသူရဲ့ စီးပှားရေးကလညျး ငှေ ထပျထပျထညျ့ရတယျ။ ကလေးစရိတျ ၊ အသုံးစရိတျ နဲ့ ဝယျထားတဲ့ အရဈကပြေးဖို့ငှတှေကေလညျး လစဉျပေးနရေတယျ။ ကလေးအမဟော အိမျမှုကိစ်စ၊ ကလေးဝယြောဝစ်စတှအေပွငျ ဝငျငှရေမယျ့အလုပျလညျး လုပျရတယျ။ ကလေးကိုလညျး ကွညျ့ရှုစောငျ့ရှောကျရတယျ။ ဆှမြေိုးမိဘ ကိုလညျး ပွနျမထောကျပံ့နိုငျ ၊ အလှူအတနျးလုပျဖို့ နဲ့ ဆေးဖိုးဝါးခကွိုစုဖို့ဆိုတာ အတှေးသကျသကျပဲ ရှိတော့တယျ။ မိဘမဲ့ဂဟောမှာ လှူဖို့ ၊ ဆေးရုံ, စာသငျခနျးမှာ လှူဖို့ဆိုတာ သူတို့နဲ့ လုံးလုံးမသကျဆိုငျတဲ့ကိစ်စတှေ ဖွဈနပွေီ။ လှူတနျးဖို့ နနေသောသာ လစဉျဝငျငှဟော အိမျသုံးစရိတျ ၊ ကလေးစရိတျ ၊ ကားစရိတျ ၊ ဝတျဖို့စားဖို့ နဲ့ လတိုငျးပေးရမယျ့အခှနျတှအေတှကျ မလောကျနိုငျဘူး။ နားလညျးမနား ရဲကွဘူး။ လူရပျတာနဲ့ ဝငျငှလေညျး ရပျမယျ။ ပေးဖို့ကနျြတဲ့ငှတှေရေယျ ၊ နစေရိတျစားစရိတျရယျ ၊ တာဝနျတှပေိုပိလာတာရယျ ၊ အလုပျ အကိုငျ အဆငျမပွမှောစိုးတဲ့စိတျရယျ ၊ ဝငျငှပေိုရခငျြတာရယျ .. ကွားထဲမှာ စိုးရိမျပူပနျရတာ မြားသထကျမြားပွီး အေးခမျြးသာယာမှု ဆိုတာ တဖွေးဖွေး ပြောကျလာခဲ့တယျ။ မတ်ေတာရိပျမွုံလေး တိတျဆိတျခွောကျကပျလာခဲ့တယျ။ လငျမယားနှဈယောကျလုံးဟာ အလုပျကောငျးကောငျး ရှိကွတယျ။ ဝငျငှကေောငျးကောငျးလညျး ရှိကွတယျ။ ဒါပမေယျ့ ငှကွေေးအခကျအခဲတှကွေားမှာ ပိတျမိပွီး ပူပနျသောကမြားနရေတယျ။ ခမျြးသာတဲ့ဘ၀ ငှကွေေးမပူပငျရတဲ့ဘ၀ ရောကျဖို့ လမျးပြောကျနခေဲ့ရတယျ။ ငှကွေေးပွဿနာဟာ တကယျ့လကျတှဘေ့ဝထဲက မိသားစုနီးပါးတိုငျးမှာ ဖွဈနတေဲ့ ပွဿနာပါ။
ကြှနျမတို့ အားလုံးနီးပါးဟာ အခွခေံပညာရေးဖွဈတဲ့ ကြောငျးသငျပညာရေး သငျရတယျ။ ပွီးရငျ ရှငျသနျနထေိုငျအသကျမှေးဖို့အတှကျ ငှရေအောငျ အသုံးခဖြို့ အသကျမှေးဝမျးကြောငျး ပညာ သငျရတယျ။ ဆရာဝနျ ၊ အငျဂငျြနီယာ ၊ ပနျးခြီ ၊ အဆိုတျော ၊ သရုပျဆောငျ ၊ စီးပှားရေးပညာ ၊ စာရငျးအငျးပညာ ၊ ရှနေ့ေ ၊ ကြောငျးဆရာ ၊ စာရေးဆရာ … စတဲ့ ဆိုငျရာနယျပယျအလိုကျ ဝငျငှရှော အသကျမှေး ကွတယျ။ ဒီ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးပညာဟာ ဝငျငှရှောပေးတဲ့ ပညာပါပဲ ……။ ဒါကွောငျ့ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးပညာကြှမျးကငျြလေ ကြှနျမတို့ ဝငျငှေ ပိုရလေ ပါပဲ။ ဝငျငှေ ပိုရလေ ခမျြးသာ လပေေါ့။ ဒါ ကြှနျမတို့ သိထားတဲ့ လမျးမှနျတဲ့ ဘဝနနေညျး ပါ။ ဘယျသူမဆို အလုပျကွိုးစားလုပျရမယျ၊ ဝငျငှမြေားမြားရအောငျ ရှာရမယျ၊ ဝငျငှေ မြားသထကျမြားလာပွီဆိုရငျ ခမျြးသာလာမယျ။ ကြှနျမတို့ ဒီလို ထငျထားကွတယျ။
တဈကယျတော့ …… တဈကယျ့အမှနျတော့ အဲဒီလို မဟုတျဘူး။ ဝငျငှမြေားမြားရှာနိုငျလေ ခမျြးသာလဆေိုတာ မဟုတျပါဘူး။ ငှကေ မိတျဆှတေို့ ကြှနျမတို့ကို ခမျြးသာအောငျ လုပျမပေးနိုငျပါဘူး။ ငှကေ ခမျြးသာအောငျ လုပျမပေးနိုငျပါဘူး။ ခမျြးသာဖို့ဆိုတာ ငှကွေေး အတတျ ပညာ ကြှမျးကငျြမှသာလငျြ ခမျြးသာနိုငျမှာပါ။ အပျေါက အမြိုးသားနဲ့အမြိုးသမီး လငျမယားနှဈယောကျဟာ အသကျမှေး ဝမျးကြောငျး ပညာကြှမျးကငျြပါရကျ ၊ ဝငျငှလေညျးကောငျးပါရကျ နဲ့ ငှကွေေးအခကျအခဲကွားမှာ လှောငျပိတျခံရပွီး ပူပငျကွောငျ့ကွ ဘဝထဲ ရောကျသှားရတာ သူတို့မှာရှိတဲ့ငှကေို ကြှမျးကြှမျးကငျြကငျြ မစီမံတတျလို့ပါပဲ။ သူတို့မှာရှိတဲ့ ငှကေို ပှားမြားအောငျ ၊ ငှပေျေါငှေ ထပျပျေါအောငျ လုပျတဲ့ ငှကွေေးအသိပညာ မရှိတဲ့အတှကျ ငှပွေဿနာတှေ ဖွဈလာတော့တာပါပဲ။ ငှကွေေးဆိုငျရာပွဿနာတှကေို မဖွရှေငျးနိုငျတဲ့အခါ နောကျဆကျတှဲရလာဒျက ဆငျးရဲခွငျးပါ။
ဒါကွောငျ့ …… ခမျြးသာခငျြတယျဆိုရငျ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးပညာတတျရုံ ၊ ဝငျငှမြေားမြားရရုံ နဲ့ ခမျြးသာတဲ့သူ ဖွဈမလာနိုငျဘူး။ ကိုယျ့ဝငျငှကေို ပှားသထကျပှားမြားအောငျ ၊ ဆုံးရှုံးမှုနညျးအောငျ လုပျဆောငျတတျဖို့ စီမံတတျဖို့ ငှကွေေးအသိပညာရှိမှသာ ခမျြးသာဖို့ လမျးစပျေါရောကျမှာပါ။
ဝငျငှပှေားသထကျပှားမြားအောငျ ၊ ဆုံးရှုံးမှုနညျးအောငျ စီမံတတျဖို့ “ငှကွေေးဆိုငျရာအသိပညာ” အကွောငျး – အပိုငျး (၂) မှာ ဆကျပါမယျရှငျ …….
ခဈြမိတျဆှမြေားအားလုံး နှဈသဈမှာ ပြျောရှငျကနျြးမာပါစေ။
စီးပှားရေး ပိုတိုးတကျအောငျမွငျပွီး ကွီးပှားခမျြးသာသူမြား ဖွဈကွပါစေ။
ယခု – “ငှေ စီမံကိနျး” ဆောငျးပါးဟာ ခဈြမိတျဆှတေို့အတှကျ နှဈသဈလကျဆောငျပါ။ အပိုငျး (၂) ဆကျပါမယျနျော။
Posted on January 7, 2018 Categories ဆောင်းပါ6း37 Comments on ငွေ စီမံကိန်း အပိုင်း (၁)
2018 နှစ်သစ်မုဏ်ဦးဝကို ရွှေအတက်နွားသိုးကြီး တိုးထွက်လာပြီးတဲ့နောက် ရေ ရှည်အတက်အတွက် အကျတစ်ခု ရှိနိုင် တယ်ဆိုတဲ့ နောက်တစ်ပတ်အတွက်ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးကွက်
ရွှေဟာ လေးလနီးပါး အတွင်း အမြင့်ဆုံးက နေ အနည်းငယ်ပြန်ကျခဲ့ပေမယ့် အဓိက ထောက်ပံ့တန်းတွေ အ ပေါ်မှာတောင့်ခံရင်း 2018 ရဲ့ပထမဆုံးသီတင်းပတ်ကို အားကောင်းတဲ့ အနေအထားဖြစ်တဲ့ 1319$ ဝန်းကျင် မှာဈေးပိတ်ခဲ့ပါတယ်။ ရွှေဟာ မနှစ်က နှစိကုန်က ရှိခဲ့တဲ့ အတက်အဟုန်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရင်းလေးပတ်ဆက်တိုက် အတက်ဖြင့်ပိတ်ခဲ့ လို့ 2017 မတ်လလယ် နောက် ပိုင်း အတက်ကြော အရှည်လျားဆုံးလည်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဆန်းစစ်လေ့လာသူအချို့က ရွှေကို အ ကောင်းမြင် အတက်ပေးနေစဉ်မှာဘဲ အချို့က တော့တက်ကနီကယ်တန်းအရ အနည်းငယ်အဝယ်ကျွံနေလို့ရေတိုမှာ အကျတစ်ခုလာနိုင် တယ်လို့ခန့်မှန်း သုံးသပ် ပါတယ်။ ဈေးကွက် ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးက ရွှေဟာ 1302 အထိကျနိုင် ပြီး ကျခဲ့ရင် 1302 မှာ ဝယ် ရမယ်လို့ဆိုခဲ့သလို နောက်ထပ် တစ်ဦးက လည်း ရွှေဟာ 1300 တန်းကိုမြဲနေသမျှကာလပတ်လုံးအတက်တန်းမ ပျောက် ဘူးလို့ ရှု့မြင် သုံးသပ်ပါတယ်။
(အာရုံစိုက် ရမယ့် ဒေါ်လာနဲ့ “နှစ်ရှည်/နှစ်တို ငွေတိုက် စာချုပ်အတိုးများကြား ကွာခြားချက်)
အချို့သောဈေးကွက်ကျွမ်းကျင် သူတွေက တော့ ရွှေဟာ တက်ကနီကယ်အရ ရောင်းလိုအားတွေရှိနိုင် ပေမယ့် သုံးပတ်ဆက်တိုက် အကျနဲ့ပိတ်ပြီး လေးလနီးပါးအနိမ့်ဆုံးနားမှာဝဲနေတဲ့ ဒေါ်လာရဲ့အားနည်းမှု့က ရွှေကို ဆက်လက်ထောက်ပံ့ထားမယ် လို့သုံးသပ် ပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း အ မေရိကန်အစိုးရ ငွေတိုက်စာချုပ် 10 နှစ် / 2နှစ်အတိုးများကွာခြားချက်ဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း အနိမ့်ဆုံးအဖြစ် 0.49% သာရှိပါတော့တယ်။ ဒီလို ” FLATTER YIELD CURVE” လို့ခေါ်တဲ့ နှစ်တို/နှစ် ရှည်အတိုးများ ကြားကွာခြားချက် ကျဉ်းမြောင်းမှု့ ဟာ စီးပွားရေးသီအိုရီအရ အ မေရိကန်ဟာ စီးပွားရေးပျက်ကပ်ထဲရောက်တော့မယ့် လက္ခာဏာပါ။ (မှတ်ချက် — အားလုံးခြုံငုံကြည့် ရင် တော့ အ မေရိကန်ဟာ စီးပွားပျက်ကပ်ထဲရောက်ဖို့ဖြစ်နိုင် ခြေနည်း)
ဒီလို ဒေါ်လာအားနည်းမှု့က ငွေဖေါင်းပွမှု့တက် မယ့်မှန်းဆချက်ကို မြင့်တက်စေ ပြီးငွေတိုက်စာချုပ်အတိုးတွေကို ကျဆင်းစေမှာပါ။ ဒီအခြေအနေဟာ လက်တွေ့အတိုးတွေကျဆင်းစေတာဖြစ်လို့ ရွှေဝယ်လိုအားကိုတက်စေပါလိမိ့မယ် လို့သုံးသပ်ပါတယ်။
( သတိထားစောင့်ကြည့်ရမယ့် စ တော့ဈေးကွက် )
အမေရိကန် စတော့ တွေဟာ အဆက်မပြတ်တက် ရင်း သမိုင်းတစ်လျောက်အမြင့်ဆုံးစံချိန်တွေကိုမရပ်မနားရိုက်ချိုးလာရာမှာ ခုတော့ စတော့ညွှန်းကိန်း DOW JONES ဟာ 25000 အမှတ်ကို ကျော်ခဲ့ပါပြီ။
အချို့သောအကဲခတ်တွေက တော့ မိုးထိ နေတဲ့ စ တော့ဈေးတွေနောက် မလိုက် လိုတော့တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ အချို့ရဲ့ငွေတွေရွှေထဲပြန် စီးဝင် နေပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ဒါပေမယ့် အချို့က တော့ ဈေးကွက်မှာ ဖြစ်နိုင် ခြေ အန္တရာယ်ကို ညွှန်းတဲ့ ညွှန်းကိန်းဟာ နိမ့်နေတဲ့အတွက် စွန့်စားလိုစိတ်တွေပြည့်နှက် နေတာ ကြောင့် ကုန်သည်တွေဟာ စ တော့နဲ့ ငွေတိုက်စာချုပ်တွေနောက်ဆက် လိုက်ကျပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် ရေရှည်မှာ စ တော့ဟာ ရွှေရဲ့ပြိုင် ဘက် ပြန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ရှု့မြင် ပါတယ်။ဒါ ကြောင့် လည်း 2018 အစကာလတိုလေးမှာတွေ့မြင် နေရတဲ့ ထူးခြားတဲ့ “စတော့ နဲ့ ရွှေ ပြိုင် တက် နေမှု့” ဟာ ဘယ်လောက် ကြာအောင် ဆက်သွားမလဲဆိုတာ ပြောဖို့စောလွန်းနေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
( စောင့် ကြည့်ရမယ့် တန်းများ )
ကုန်စည်ဈေးကွက် ဆန်းစစ်လေ့လာသူတွေက ဇန်နဝါရီဟာသမိုင်းဝင်ရွှေမြူးတဲ့လဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းက အတက် ကြိုက်ခဲ့ကြတာပါ။ သူတို့ က ရွှေဟာ တက်ကနီကယ်အရ အားကောင်းတဲ့အဟုန်ကိုတည်ဆောက်မှု့နှင့်အတူ ထပ်တက်ဖို့ အလား အလာ ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တန်းကျွမ်းကျင် သူတစ်ဦးက တော့ ရွှေဟာ 1333 ကိုအားစမ်းနိုငိ ပြီး ယင်းအမှတ်မှာ အမြတိပိုင်းအ ရောင်းတွေကြောင့် ပြန်ကျနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ နောက်တစ်ဦးက တော့ 1315 ဟအဓိကစောင့်ကြည့်ရမယ့်တန်းဖြစ်ပြီး ဒီတန်းကိုမြဲနေ သရွှေ့အတက်မပျောက်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
( နိဂုံးချုပ် )
လာမယ့်အပတ်ဟာ အားလပ် ရက် ရှည်က နေ ကုန်သည်တွေစုံညီစွာပြန် လာကျမှာဖြစ်ပေမယ့် အစပိုင်းရက်တွေမှာဒေတာ တွေလည်း မရှိသ လောက် နည်းတဲ့အတွက် ဈေးကွက်ဟာ လေးလံထိုင်းမှိုင်းနေဦးမှာပါ။ဒါပေမယ့် ကြာသာပ တေး သောကြာမှာ ငွေဖေါင်းပွမှု့ အတွက် အ ရေးကြီး ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့ PPI CPI အပြီး RETAIL SALES ဒေတာတွေထွက်ချိန်မှာတော့ ပုံမှန် ရောင်း/ဝယ်တဲ့ပမာဏကို ရောက်လာပြီး မြိုင် ဆိုင်လာမှာပါ။ ဒီလို မြိုင် ဆိုင် လာချိန်မှာအမြတ်ပိုင်းအ ရောင်းက နေ ရေ ရှည်အတက်အတွက်အ ထောက်အပံ့ဖြစ်စေ မယ့် ကာလတိုအကျတစ်ခု ရောက် လာနိုင် တယ်လို့ ထင် မြင် ယူဆမိပါကြောင်း….။
Credit – ရွှေချစ်သူများ Group မှ
ရှဟော လေးလနီးပါး အတှငျး အမွငျ့ဆုံးက နေ အနညျးငယျပွနျကခြဲ့ပမေယျ့ အဓိက ထောကျပံ့တနျးတှေ အ ပျေါမှာတောငျ့ခံရငျး 2018 ရဲ့ပထမဆုံးသီတငျးပတျကို အားကောငျးတဲ့ အနအေထားဖွဈတဲ့ 1319$ ဝနျးကငျြ မှာဈေးပိတျခဲ့ပါတယျ။ ရှဟော မနှဈက နှစိကုနျက ရှိခဲ့တဲ့ အတကျအဟုနျကို ဆကျလကျထိနျးသိမျးရငျးလေးပတျဆကျတိုကျ အတကျဖွငျ့ပိတျခဲ့ လို့ 2017 မတျလလယျ နောကျ ပိုငျး အတကျကွော အရှညျလြားဆုံးလညျးဖွဈခဲ့ရပါတယျ။ ဆနျးစဈလလေ့ာသူအခြို့က ရှကေို အ ကောငျးမွငျ အတကျပေးနစေဉျမှာဘဲ အခြို့က တော့တကျကနီကယျတနျးအရ အနညျးငယျအဝယျကြှံနလေို့ရတေိုမှာ အကတြဈခုလာနိုငျ တယျလို့ခနျ့မှနျး သုံးသပျ ပါတယျ။ ဈေးကှကျ ကြှမျးကငျြသူတဈဦးက ရှဟော 1302 အထိကနြိုငျ ပွီး ကခြဲ့ရငျ 1302 မှာ ဝယျ ရမယျလို့ဆိုခဲ့သလို နောကျထပျ တဈဦးက လညျး ရှဟော 1300 တနျးကိုမွဲနသေမြှကာလပတျလုံးအတကျတနျးမ ပြောကျ ဘူးလို့ ရှု့မွငျ သုံးသပျပါတယျ။
(အာရုံစိုကျ ရမယျ့ ဒျေါလာနဲ့ “နှဈရှညျ/နှဈတို ငှတေိုကျ စာခြုပျအတိုးမြားကွား ကှာခွားခကျြ)
အခြို့သောဈေးကှကျကြှမျးကငျြ သူတှကေ တော့ ရှဟော တကျကနီကယျအရ ရောငျးလိုအားတှရှေိနိုငျ ပမေယျ့ သုံးပတျဆကျတိုကျ အကနြဲ့ပိတျပွီး လေးလနီးပါးအနိမျ့ဆုံးနားမှာဝဲနတေဲ့ ဒျေါလာရဲ့အားနညျးမှု့က ရှကေို ဆကျလကျထောကျပံ့ထားမယျ လို့သုံးသပျ ပါတယျ။ တဈဖကျမှာလညျး အ မရေိကနျအစိုးရ ငှတေိုကျစာခြုပျ 10 နှဈ / 2နှဈအတိုးမြားကှာခွားခကျြဟာ နှဈပေါငျးမြားစှာအတှငျး အနိမျ့ဆုံးအဖွဈ 0.49% သာရှိပါတော့တယျ။ ဒီလို ” FLATTER YIELD CURVE” လို့ချေါတဲ့ နှဈတို/နှဈ ရှညျအတိုးမြား ကွားကှာခွားခကျြ ကဉျြးမွောငျးမှု့ ဟာ စီးပှားရေးသီအိုရီအရ အ မရေိကနျဟာ စီးပှားရေးပကျြကပျထဲရောကျတော့မယျ့ လက်ခာဏာပါ။ (မှတျခကျြ — အားလုံးခွုံငုံကွညျ့ ရငျ တော့ အ မရေိကနျဟာ စီးပှားပကျြကပျထဲရောကျဖို့ဖွဈနိုငျ ခွနေညျး)
ဒီလို ဒျေါလာအားနညျးမှု့က ငှဖေေါငျးပှမှု့တကျ မယျ့မှနျးဆခကျြကို မွငျ့တကျစေ ပွီးငှတေိုကျစာခြုပျအတိုးတှကေို ကဆြငျးစမှောပါ။ ဒီအခွအေနဟော လကျတှအေ့တိုးတှကေဆြငျးစတောဖွဈလို့ ရှဝေယျလိုအားကိုတကျစပေါလိမိ့မယျ လို့သုံးသပျပါတယျ။
( သတိထားစောငျ့ကွညျ့ရမယျ့ စ တော့ဈေးကှကျ )
အမရေိကနျ စတော့ တှဟော အဆကျမပွတျတကျ ရငျး သမိုငျးတဈလြောကျအမွငျ့ဆုံးစံခြိနျတှကေိုမရပျမနားရိုကျခြိုးလာရာမှာ ခုတော့ စတော့ညှနျးကိနျး DOW JONES ဟာ 25000 အမှတျကို ကြျောခဲ့ပါပွီ။
အခြို့သောအကဲခတျတှကေ တော့ မိုးထိ နတေဲ့ စ တော့ဈေးတှနေောကျ မလိုကျ လိုတော့တဲ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူ အခြို့ရဲ့ငှတှေရှေထေဲပွနျ စီးဝငျ နပွေီလို့ ဆိုပါတယျ။ဒါပမေယျ့ အခြို့က တော့ ဈေးကှကျမှာ ဖွဈနိုငျ ခွေ အန်တရာယျကို ညှနျးတဲ့ ညှနျးကိနျးဟာ နိမျ့နတေဲ့အတှကျ စှနျ့စားလိုစိတျတှပွေညျ့နှကျ နတော ကွောငျ့ ကုနျသညျတှဟော စ တော့နဲ့ ငှတေိုကျစာခြုပျတှနေောကျဆကျ လိုကျကပြါလိမျ့မယျ။
ဒါကွောငျ့ ရရှေညျမှာ စ တော့ဟာ ရှရေဲ့ပွိုငျ ဘကျ ပွနျဖွဈလာလိမျ့မယျလို့ရှု့မွငျ ပါတယျ။ဒါ ကွောငျ့ လညျး 2018 အစကာလတိုလေးမှာတှမွေ့ငျ နရေတဲ့ ထူးခွားတဲ့ “စတော့ နဲ့ ရှေ ပွိုငျ တကျ နမှေု့” ဟာ ဘယျလောကျ ကွာအောငျ ဆကျသှားမလဲဆိုတာ ပွောဖို့စောလှနျးနပေါတယျလို့ဆိုပါတယျ။
( စောငျ့ ကွညျ့ရမယျ့ တနျးမြား )
ကုနျစညျဈေးကှကျ ဆနျးစဈလလေ့ာသူတှကေ ဇနျနဝါရီဟာသမိုငျးဝငျရှမွေူးတဲ့လဖွဈတဲ့အတှကျ ဒီဇငျဘာလလယျကတညျးက အတကျ ကွိုကျခဲ့ကွတာပါ။ သူတို့ က ရှဟော တကျကနီကယျအရ အားကောငျးတဲ့အဟုနျကိုတညျဆောကျမှု့နှငျ့အတူ ထပျတကျဖို့ အလား အလာ ရှိတယျလို့ဆိုပါတယျ။ တနျးကြှမျးကငျြ သူတဈဦးက တော့ ရှဟော 1333 ကိုအားစမျးနိုငိ ပွီး ယငျးအမှတျမှာ အမွတိပိုငျးအ ရောငျးတှကွေောငျ့ ပွနျကနြိုငျတယျလို့ဆိုပါတယျ။ နောကျတဈဦးက တော့ 1315 ဟအဓိကစောငျ့ကွညျ့ရမယျ့တနျးဖွဈပွီး ဒီတနျးကိုမွဲနေ သရှအေ့တကျမပြောကျဘူးလို့ဆိုပါတယျ။
( နိဂုံးခြုပျ )
လာမယျ့အပတျဟာ အားလပျ ရကျ ရှညျက နေ ကုနျသညျတှစေုံညီစှာပွနျ လာကမြှာဖွဈပမေယျ့ အစပိုငျးရကျတှမှောဒတော တှလေညျး မရှိသ လောကျ နညျးတဲ့အတှကျ ဈေးကှကျဟာ လေးလံထိုငျးမှိုငျးနဦေးမှာပါ။ဒါပမေယျ့ ကွာသာပ တေး သောကွာမှာ ငှဖေေါငျးပှမှု့ အတှကျ အ ရေးကွီး ဒတောတှဖွေဈတဲ့ PPI CPI အပွီး RETAIL SALES ဒတောတှထှေကျခြိနျမှာတော့ ပုံမှနျ ရောငျး/ဝယျတဲ့ပမာဏကို ရောကျလာပွီး မွိုငျ ဆိုငျလာမှာပါ။ ဒီလို မွိုငျ ဆိုငျ လာခြိနျမှာအမွတျပိုငျးအ ရောငျးက နေ ရေ ရှညျအတကျအတှကျအ ထောကျအပံ့ဖွဈစေ မယျ့ ကာလတိုအကတြဈခု ရောကျ လာနိုငျ တယျလို့ ထငျ မွငျ ယူဆမိပါကွောငျး….။
Credit – ရှခေဈြသူမြား Group မှ
Posted on January 7, 2018 Categories ဆောင်းပါး522 Comments on 2018 နှစ်သစ်မုဏ်ဦးဝကို ရွှေအတက်နွားသိုးကြီး တိုးထွက်လာပြီးတဲ့နောက် ရေ ရှည်အတက်အတွက် အကျတစ်ခု ရှိနိုင် တယ်ဆိုတဲ့ နောက်တစ်ပတ်အတွက်ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးကွက်
မြန်မာပြည်စီးပွားရေး နလန်ပြန်ထူဖို့မလွယ်… အပိုင်း(၂)
ပွညျသူရှေးခယျြထားတဲ့ ဒီမိုကရစေီအစိုးရ သကျတမျး၂နှဈပွညျ့တော့မယျ။ နိငျငံတကာ investors တှေ မြှျောမှနျးသလောကျမဝငျခဲ့..။ မွဈေေးတကျလို့မလာတာ ဆိုပွီး ပုံစံမကတြဲ့အခှနျကောကျခံနညျးတှနေဲ့အိမျခွံမွဈေေးကိုဆှဲခခြဲ့။ အသံကွောငျ့ဖားသေ ဆိုသလို တိုကျခနျးဈေးတှေ မွဈေေးတှေ ထိုးကြ အရောငျးဝယျတှရေပျ။ ဒီတော့ တဈနှယျငငျတဈစငျ ပါလို့ဆောကျလုပျရေး လုပျငနျးတှရေပျတနျခဲ့…….။ ဘဏျမှာပေါငျထားတဲ့သူတှေ ကလညျး မွဈေေးကတြော့ ပွနျမရှေးခငျြ……….။ အတိုးမလာ အရငျးမလာတဲ့ မွတှေပေိုကျဘောမိပွီး ဘဏျတှအေနနေဲ့ခြေးငှေ လုပျငနျးကနေ ဝငျငှအေရနညျး တဈဖကျမှာလညျး စီးပှားရေးလုပျငနျးတှေ မကောငျးတော့ ဘယျသူမှ လုပျငနျးအသဈတှမေခြဲ့ မစှနျ့စားရဲ..။ ဒီတော့ အမွတျ ရမှာသခြောတဲ့ ဘဏျမှာပဲ ငှအေပျပွီး အတိုးထိုငျစားနကွေ အပျငှတှေမြေားလာပွီး ခြေးငှတှေကေ အတိုးမရတော့ ဘဏျတှကေ အိပျစိုကျ…။
ဒီတော့ ..အပျငှအေပျေါ အတိုးတှေ လြှော့ခဖြို့ ကွိုးစား…ရတာပေါ့…. တကယျတော့ အစိုးရအနနေဲ့လညျး ဘဏျတှလေကျထဲ အပျငှမြေားတာမကွိုကျ ဘဏျတှမှောအပျလို့ တိုငျးပွညျစီးပှားရေးမတိုးတကျ ထုတျကုနျလုပျငနျးတှအေပျေါ ရငျးနှီးမွုပျနှံမှ ပွညျတှငျး ကုနျထုတျလုပျအား တိုးတကျလာပွီး နိငျငံခွားသှငျးကုနျတှေ လြော့ကလြာမယျ…..။ လိုငှဘေတျဂကျြနညျးလာမယျ အလုပျကိုငျ အခှငျ့လမျးတှေ ပေါမြားလာမယျ.ပေါ့လေ….။
ဒီတော့..တပိုငျတနိငျ ငှစေုထားတဲ့သူတှေ…..နဲ့ ။ ခတျေရစေီးကွောငျးမှာ ဘာမှမလုပျတတျလို့ ဘဏျအတိုး…..။
ငှမေဲခတျေက ဂှငျတညျ့ခဲ့တဲ့ ဘောစိတှေ…..
ဘုရားတရမဲ့ကိနျး အပျငှအေတိုးနူနျးလြှော့တော့ ဘဏျထဲကငှတှေပွေနျထုတျ။
လုပျငနျးအသဈလုပျဖို့မပွောနဲ့ လကျရှိလညျပတျနတေဲ့လုပျ ငနျးတှတေောငျ ငွီးသံတှပေလုံစီလို့….။ သကျပွငျးခသြံတှထေပျလို့ မွဆေရာကွီးတှတေောငျ မွမွေိုခံနတေဲ့အခြိနျဆိုတော့……။ မွလေညျးမဝယျရဲ ဒီတော့ဘဏျကနထေုတျလာ တဲ့ငှထေုပျကွီးတှနေဲ့ ။ ရှေ/ဒျေါလာ တှသော ဝိုငျးဝယျကွရုံရှိတာပေါ့……။
ဘဏျခြေးငှေ/အပျငှေ အပျေါ….အတိုးနူနျးတှေ တကယျလြှော့ခခြဲ့မယျဆိုရငျ ဘဏျခြေးငှပေိနတေဲ့ မွသေူဌေးတှေ လုပျငနျးရှငျ ကွီးတှေ ကတော့ ဦးဆုံး အသကျရှူခြောငျမယျ။ ဘဏျတှလေညျးအိပျစိုကျနတော လြော့ကသြှားမယျ။ ရှဈေေး ၁၀သိနျးနားရောကျမယျ။ ဒျေါလာဈေး ၁၃၅၀အောကျ မဆငျးနိငျတော့ဘူး။ ဘဏျတိုးနူနျးထကျ အဆ တဈရာလောကျသာတဲ့ အမွတျဝစေုတှပေေးမယျဆိုပွီး လိမျလညျမဲ့ မုဆိုးတှေ တောပဈထှကျလာကွလိမျ့မယျ။ သတိထားကွပါ…..။ အရငျးနှီးမရှိလို့ အရငျးနှီးမတောငျ့လို့ လညျပတျမှု ကပျြတညျးနတေဲ့ လုပျငနျးတှအေတှကျကတော့ ဘာမှမထူး ….။ ဘာလို့မထူးအရငျးနှီးမတောငျ့လို့ ဘဏျကနခြေေးပါတယျဆိုမှ နာမညျပေါကျဂရနျမွေ ရှိမှရမှာတဲ့လေ……….။
သမားတျောဆိုတာ အနာနဲ့တညျ့တဲ့ဆေး ပေးနိငျရမယျ…..။ ဆေးထညျ့ပေးပွီး ဒဏျရာတှပေေးနပွေနျ လညျး လူနာကတော့ နလနျမထူနိငျတော့မှာ အသခြောပါပဲ………။
ပြည်သူရွေးချယ်ထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီအစိုးရ သက်တမ်း၂နှစ်ပြည့်တော့မယ်။ နိင်ငံတကာ investors တွေ မျှော်မှန်းသလောက်မဝင်ခဲ့..။ မြေဈေးတက်လို့မလာတာ ဆိုပြီး ပုံစံမကျတဲ့အခွန်ကောက်ခံနည်းတွေနဲ့အိမ်ခြံမြေဈေးကိုဆွဲချခဲ့။ အသံကြောင့်ဖားသေ ဆိုသလို တိုက်ခန်းဈေးတွေ မြေဈေးတွေ ထိုးကျ အရောင်းဝယ်တွေရပ်။ ဒီတော့ တစ်နွယ်ငင်တစ်စင် ပါလို့ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေရပ်တန်ခဲ့…….။ ဘဏ်မှာပေါင်ထားတဲ့သူတွေ ကလည်း မြေဈေးကျတော့ ပြန်မရွေးချင်……….။ အတိုးမလာ အရင်းမလာတဲ့ မြေတွေပိုက်ဘောမိပြီး ဘဏ်တွေအနေနဲ့ချေးငွေ လုပ်ငန်းကနေ ဝင်ငွေအရနည်း တစ်ဖက်မှာလည်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ မကောင်းတော့ ဘယ်သူမှ လုပ်ငန်းအသစ်တွေမချဲ့ မစွန့်စားရဲ..။ ဒီတော့ အမြတ် ရမှာသေချာတဲ့ ဘဏ်မှာပဲ ငွေအပ်ပြီး အတိုးထိုင်စားနေကြ အပ်ငွေတွေများလာပြီး ချေးငွေတွေက အတိုးမရတော့ ဘဏ်တွေက အိပ်စိုက်…။
ဒီတော့ ..အပ်ငွေအပေါ် အတိုးတွေ လျှော့ချဖို့ ကြိုးစား…ရတာပေါ့…. တကယ်တော့ အစိုးရအနေနဲ့လည်း ဘဏ်တွေလက်ထဲ အပ်ငွေများတာမကြိုက် ဘဏ်တွေမှာအပ်လို့ တိုင်းပြည်စီးပွားရေးမတိုးတက် ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းတွေအပေါ် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှ ပြည်တွင်း ကုန်ထုတ်လုပ်အား တိုးတက်လာပြီး နိင်ငံခြားသွင်းကုန်တွေ လျော့ကျလာမယ်…..။ လိုငွေဘတ်ဂျက်နည်းလာမယ် အလုပ်ကိုင် အခွင့်လမ်းတွေ ပေါများလာမယ်.ပေါ့လေ….။
ဒီတော့..တပိုင်တနိင် ငွေစုထားတဲ့သူတွေ…..နဲ့ ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းမှာ ဘာမှမလုပ်တတ်လို့ ဘဏ်အတိုး…..။
ငွေမဲခေတ်က ဂွင်တည့်ခဲ့တဲ့ ဘောစိတွေ…..
ဘုရားတရမဲ့ကိန်း အပ်ငွေအတိုးနူန်းလျှော့တော့ ဘဏ်ထဲကငွေတွေပြန်ထုတ်။
လုပ်ငန်းအသစ်လုပ်ဖို့မပြောနဲ့ လက်ရှိလည်ပတ်နေတဲ့လုပ် ငန်းတွေတောင် ငြီးသံတွေပလုံစီလို့….။ သက်ပြင်းချသံတွေထပ်လို့ မြေဆရာကြီးတွေတောင် မြေမြိုခံနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့……။ မြေလည်းမဝယ်ရဲ ဒီတော့ဘဏ်ကနေထုတ်လာ တဲ့ငွေထုပ်ကြီးတွေနဲ့ ။ ရွှေ/ဒေါ်လာ တွေသာ ဝိုင်းဝယ်ကြရုံရှိတာပေါ့……။
ဘဏ်ချေးငွေ/အပ်ငွေ အပေါ်….အတိုးနူန်းတွေ တကယ်လျှော့ချခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘဏ်ချေးငွေပိနေတဲ့ မြေသူဌေးတွေ လုပ်ငန်းရှင် ကြီးတွေ ကတော့ ဦးဆုံး အသက်ရှူချောင်မယ်။ ဘဏ်တွေလည်းအိပ်စိုက်နေတာ လျော့ကျသွားမယ်။ ရွှေဈေး ၁၀သိန်းနားရောက်မယ်။ ဒေါ်လာဈေး ၁၃၅၀အောက် မဆင်းနိင်တော့ဘူး။ ဘဏ်တိုးနူန်းထက် အဆ တစ်ရာလောက်သာတဲ့ အမြတ်ဝေစုတွေပေးမယ်ဆိုပြီး လိမ်လည်မဲ့ မုဆိုးတွေ တောပစ်ထွက်လာကြလိမ့်မယ်။ သတိထားကြပါ…..။ အရင်းနှီးမရှိလို့ အရင်းနှီးမတောင့်လို့ လည်ပတ်မှု ကျပ်တည်းနေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေအတွက်ကတော့ ဘာမှမထူး ….။ ဘာလို့မထူးအရင်းနှီးမတောင့်လို့ ဘဏ်ကနေချေးပါတယ်ဆိုမှ နာမည်ပေါက်ဂရန်မြေ ရှိမှရမှာတဲ့လေ……….။
သမားတော်ဆိုတာ အနာနဲ့တည့်တဲ့ဆေး ပေးနိင်ရမယ်…..။ ဆေးထည့်ပေးပြီး ဒဏ်ရာတွေပေးနေပြန် လည်း လူနာကတော့ နလန်မထူနိင်တော့မှာ အသေချာပါပဲ………။
Posted on January 7, 2018 Categories ဆောင်းပါး21 Comments on မြန်မာပြည်စီးပွားရေး နလန်ပြန်ထူဖို့မလွယ်… အပိုင်း(၂)
“ဝ” ငွေစက္ကူ ကောလာဟလ မဟုတ်မှန်ကြောင်းငြင်းဆို
ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA က သူတို့ကိုယ်ပိုင်ငွေစက္ကူတွေ ထုတ်ဝေမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမဟုတ်မှန်ကြောင်း ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော်ရဲ့ ပြင်ပဆက်ဆံရေးရုံး လားရှိုးတာဝန်ခံ ဦးညီရမ်းက ငြင်းဆိုပါတယ်။
ဝပြည်က သူတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအတွက် ကိုယ်ပိုင်ငွေစက္ကူအဖြစ် ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ပေါက်ယူချမ်းရဲ့ရုပ်ပုံပါတဲ့ ၁၀၀ တန်နဲ့ ၅၀ တန်ငွေစက္ကူတွေ ရိုက်နှက်ထုတ်ဝေသုံးစွဲမယ်လို့ လူမှုကွန်ရက်မှာ သတင်းထွက်ပေါ်ပြောဆိုနေကြတဲ့အတွက် ဘီဘီစီက ဦးညီရန်းကို မေးမြန်းရာမှာတော့ ဒါဟာ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်လိုတဲ့ သဘောနဲ့ တမင်လုပ်ကြံဖန်တီးတဲ့ ကောလာဟလသာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီနဲ့ မြန်မာအစိုးရတို့ အဆင်ပြေညီညွတ်နေတာကို မနာလိုတဲ့သူတွေက တမင် ရန်တိုက်ပေးတာလို့လည်း သူကဆိုပါတယ်။
ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကြီးဆုံး လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားသူပုန်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဝငှစေက်ကူ ကောလာဟလ မဟုတျမှနျကွောငျးငွငျးဆို
ဝပွညျသှေးစညျးညီညှတျရေးတပျမတျော UWSA က သူတို့ကိုယျပိုငျငှစေက်ကူတှေ ထုတျဝမေယျဆိုတဲ့ သတငျးမဟုတျမှနျကွောငျး ဝပွညျသှေးစညျးညီညှတျရေး တပျမတျောရဲ့ ပွငျပဆကျဆံရေးရုံး လားရှိုးတာဝနျခံ ဦးညီရမျးက ငွငျးဆိုပါတယျ။
ဝပွညျက သူတို့ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေအတှကျ ကိုယျပိုငျငှစေက်ကူအဖွဈ ဝပွညျသှေးစညျးညီညှတျရေးပါတီရဲ့ ဥက်ကဋ်ဌ ပေါကျယူခမျြးရဲ့ရုပျပုံပါတဲ့ ၁၀၀ တနျနဲ့ ၅၀ တနျငှစေက်ကူတှေ ရိုကျနှကျထုတျဝသေုံးစှဲမယျလို့ လူမှုကှနျရကျမှာ သတငျးထှကျပျေါပွောဆိုနကွေတဲ့အတှကျ ဘီဘီစီက ဦးညီရနျးကို မေးမွနျးရာမှာတော့ ဒါဟာ သှေးထိုးလှုံ့ဆျောလိုတဲ့ သဘောနဲ့ တမငျလုပျကွံဖနျတီးတဲ့ ကောလာဟလသာဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ဝပွညျသှေးစညျးညီညှတျရေးပါတီနဲ့ မွနျမာအစိုးရတို့ အဆငျပွညေီညှတျနတောကို မနာလိုတဲ့သူတှကေ တမငျ ရနျတိုကျပေးတာလို့လညျး သူကဆိုပါတယျ။
ဝပွညျသှေးစညျးညီညှတျရေးတပျမတျောဟာ မွနျမာနိုငျငံမှာ အကွီးဆုံး လကျနကျကိုငျ တိုငျးရငျးသားသူပုနျအဖှဲ့ဖွဈပါတယျ။
Posted on January 7, 2018 Categories News356 Comments on “ဝ” ငွေစက္ကူ ကောလာဟလ မဟုတ်မှန်ကြောင်းငြင်းဆို
Photo Artist MTOung
Posted on January 7, 2018 Categories ဆောင်းပါး860 Comments on အဆင်ပြေပြေဖြတ်သန်းချင်လျှင်
ဘဏ်နဲ့ အတူ ဆက်တိုက်လုပ်ရမယ့်အရာတွေ
နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေကို Exporter တွေအတွက် ဒေါ်လာနဲ့ပါ ချေးငွေ ချေးခွင့်ပေးဖို့ ဆောင်ရွက်သလို Call Deposit တွေကိုလည်း တစ်နှစ်အတိုးနှုန်းကို ဇန်န၀ါရီလ ၂ ရက်နေ့ကနေစပြီး ၂ ရာခိုင်နှုန်းဘဲပေးတော့မယ်ဆိုတာ ဘဏ်တွေပိုက်ဆံကို အပြင်ကို ပြန်ထွက်အောင် လုပ်တာရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲ။
နိုင်ငံမှာ စီးပွားရေး နှေးနေရင် ဘဏ်တိုးတွေ လျော့ချတာ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဘဏ် ဥက္ကဌဟောင်း ဂရင်းစပန်း အသုံးချသွားတဲ့နည်းဘဲ။ ဂရင်းစပန်းက အဲ့ဒီစနစ်ကို အခြေခံပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ဘဏ်စနစ်တွေကို ပြောင်းလဲပြီး စီးပွားရေးကို ထိပ်ဆုံးအထိ ဆွဲတင်နိုင် ခဲ့တယ်။
နိုင်ငံစီးပွားရေး ကျလာရင် သူဌေးတွေ အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ ဘဏ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံအပ်ထားပြီး အတိုးဘဲ ထုတ်စားနေတယ်။ အဲ့လို အချိန် မှာ ဘဏ်တွေက အတိုးနှုန်းကို သူဌေးတွေဘဏ်မှာ ပိုက်ဆံမအပ်ချင်လောက်တဲ့အထိ ချပစ်ရတယ်။ ဒါမှ သူဌေးက သူ့ပိုက်ဆံကို ပြန်ထုတ်ပြီး တစ်နေရာရာမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြလိမ့်မယ်။
ငွေကြေးဖောင်းပွတာ မကောင်းသလို ငွေကြေးရှားပါးတာလဲ မကောင်းဘူး။ နိုင်ငံမှာ ငွေကြေးလည်ပတ်မှု အရှိန်ကောင်းနေလေ စီးပွားရေး ကောင်းလေဘဲ။ ဒါကြောင့် စီးပွားရေးမောင်းနှင်အားကောင်းအောင် ငွေကြေးလည်ပတ်မှုတွေ ကောင်းနေရလိမ့်မယ်။ ပြည်သူတွေ လက်ထဲမှာ ၀ယ်လိုအားတွေ၊ ပိုက်ဆံတွေ ရှိနေရမယ်။
ဒီလို ငွေကြေးလည်ပတ်မှု အားကောင်းအောင် အစိုးရ (တနည်း) ဗဟိုဘဏ် က ထိန်းကြောင်း ပေးနေရမှာ။ လိုအပ်တဲ့ ငွေကြေး လည်ပတ်မှုထက် ပိုနေရင်လည်း ဘဏ်တိုးတွေ ပြန်မြှင့်ပြီး ပိုက်ဆံတွေ ဘဏ်တွေထဲရောက်အောင် တနည်းအားဖြင့် ငွေကြေး လည်ပတ်မှု နှေးသွားအောင် ပြန်လုပ်ရတာဘဲ။
မြန်မာနိုင်ငံက စီးပွားရေး နှေးကွေးသွားတာ ၂ နှစ်လောက်ရှိခဲ့ပြီ။ ခန့်မှန်းရရင် လက်ရှိအစိုးရလက်ထက် သင်္ကြန်တွေ၊ အထပ်မြင့်တွေ၊ လုပ်ငန်းပြန်ရုတ်သိမ်းတာတွေ နောက်ပိုင်းကျဆင်းသွားတာ သတိထားမိတယ်။ ငွေကြေးလည်ပတ်အားကောင်းမယ့် ကိစ္စတွေကို ဟန့်တားလိုက်သလို ဖြစ်စေခဲ့လို့ပါဘဲ။
အခု ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်တွေကနေတဆင့် ငွေကြေးတွေကို ပြည်သူတွေလက်ထဲပြန်ရောက်အောင် စတင်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ ထင်မိတယ်။ ဗဟိုဘဏ်ကနေ ထုတ်တဲ့ အမိန့်မဟုတ်ဘဲ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ အသင်းကနေ ထုတ်တာဖြစ်တော့ ရှေ့တိုး၊ နောက်ဆုတ် လုပ်ရ လွယ်အောင် ဆောင်ရွက်တဲ့သဘောမျိုး မြင်တယ်။
Call Deposit တစ်မျိုးကိုဘဲ အတိုးနှုန်းလျော့ချတာလည်း ထိရောက်မှုအားတော့ အများကြီး မဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ Saving Account ၊ Limited Account ၊ Loan Account တွေက အစ လျော့ချပေးဖို့တော့ လိုသေးတယ်။ ဒါလည်း တဆင့်စီလာမယ်လို့ မျှော်မှန်းပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက လမ်း၊ တံတား၊ လျှပ်စစ်၊ ကျောင်း၊ ရုံး စတဲ့ အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးအပိုင်းမှာ အစိုးရ တင်ဒါ အောင်သော ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကို အာမခံပစ္စည်းမယူဘဲ အတိုး ၁၃ % နှုန်းနဲ့ CHD Bank က ချေးငွေ ထုတ်ပေးမယ် ဆိုတယ်။
ဒါ နိုင်ငံတကာက ကျင့်သုံးနေတဲ့ Project Loan ပုံစံပါ။ ကြိုဆိုရပါမယ်။ CHD ဘဏ်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်အားလုံး လိုက်လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ၁၃% အတိုး တစ်ခုနဲ့ တင်ဒါအလုပ် အနည်းဆုံး ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ပြီးနေရမယ် ဆိုတာလေးဘဲ ပြောစရာရှိတယ်။ နောက်တော့ တဖြည်းဖြည်း ပုံစံပြောင်းလာမယ် ထင်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ လျင်လျင်မြန်မြန်တိုးတက်သွားတာ အဲ့ဒီလို Project Loan တွေကြောင့်ဘဲ။
အခုအချိန်မှာ ရပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ပြန်လည်ပတ်နိုင်အောင် အစိုးရက အားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်ပေးဖို့ လိုတယ်။ စီးပွားရေးကို နိုင်နိုင် နင်းနင်း လုပ်နိုင်လို့ နိုင်ငံစီးပွားရေး ကောင်းလာရင် စစ်တိုက်ဖို့ ဘယ်သူမှ စိတ်မ၀င်စားတော့ဘူးဆိုတာ ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံတွေကို ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေး မရှိလို့ စီးပွားရေး မကောင်းဘူး။ စီးပွားရေး မကောင်းလို့ လက်နက်ကိုင်ရတယ်ဆိုပြီး ပေါက်ပင်ဘာကြောင့် ကိုင်းရတယ် ဇာတ်လမ်းရိုက်နေတာ အဖြေမှန် မဟုတ်ပါဘူး။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့်သူတွေက နယ်စွန်နယ်ဖျားမှာ ရင်းနှီးကြဖို့ စိတ်ဝင်စားကြတာ မဟုတ်ဘူး။
စီးပွားရေးကောင်းနေရင် အသက်က တန်ဘိုးရှိလာတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူ့အသက်ကို တန်ဘိုးမထားဆုံး နိုင်ငံတွေကလည်း အဆင်းရဲ ဆုံးနိုင်ငံတွေဘဲ။ ချမ်းသာလာလေလေ သေမှာကြောက်လေလေ၊ ဆင်းရဲလာလေလေ သေမထူးနေမထူး လို့ ခံယူလာလေလေဘဲ။ ဒီတော့ နိုင်ငံစီးပွားရေး ကကောင်းနေဖို့ လုပ်ကို လုပ်ရပါမယ်။
အခုက စီးပွားရေးသမားတွေ လက်ညှိုးအထိုးဆုံးက ဘဏ်ရယ်၊ ဥပဒေတွေရယ်ကိုဘဲ။ တစ်လောက စီးပွားရေး စစ်တမ်းကောက်တော့ မြန်မာနိုင်ငံကို ယုံကြည်မှုအဆင့်တွေ လျော့ကျလာစေတာက ဘာကြောင်းတွေကြောင့်လဲလို့ မေးမြန်းတဲ့အခါ မမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေ ထွက်လာမှာကို ကြောက်လို့ဆိုတဲ့ အချက်လဲပါတယ်။
ဒါ ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုရင် စီးပွားရေး မူဝါဒ ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးဘူးဆိုတာကို ပြတာဘဲ။ ဘယ်လောက်အခြေအနေမှာဖြစ်ဖြစ် လွှတ်တော်က ပယ်ချတယ်၊ ရုတ်သိမ်းတယ်၊ ဖျက်သိမ်းတယ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်သော အမိန့်တွေ ထွက်လာမှာကို ကြောက်ကြတာဘဲ။ အဲ့ဒီလို ကြောက်နေအောင် မြန်မာနိုင်ငံက ကောင်းကောင်းပြသပေးခဲ့တာ လက်ရှိအချိန်ထိဘဲဆိုတာ လွှတ်တော် အမတ်တွေ ဆွေးနွေးကြ၊ အဆိုတင်ကြရင် သိနိုင်ကြားနိုင်ပါတယ်။ ပြန်သိမ်းမယ်ဆိုတာတွေ များလှပါတယ်။
တွေးမိတာ ဒီ ၅ နှစ်ကတော့ ပြန်သိမ်းတာနဲ့ဘဲ အချိန်ကုန်သွားမယ်လို့ ယူဆတယ်။
ဒီလို ပြင်ဆင်ထားရင်လဲ နောက်တစ်ချိန်အတွက် အခြေခံ အုပ်မြစ်တွေ ချထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ လျှပ်စစ်ကို ဘယ်ကထုတ်မယ်၊ ဘယ်လို ထုတ်မယ်မျိုးပေ့ါ။ တစ်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ကို ၂၀၁၈ မှ ၂၀၄၀ ပြည့်နှစ်အထိ မဂ္ဂါဝပ် ၄၇၀၀ ထုတ်လုပ်နိုင်မယ့် လျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေး စက်ရုံ စီမံကိန်း ၁၁ ခု ဆောင်ရွက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ ဖတ်လိုက်ရတယ်။
ဒီလို Infrastructure တွေကို ပွင့်လင်းမြင်သာအောင်နဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့်သူတွေ တွက်ချက်လို့ ရအောင် ထုတ်ပြန်ပေးထားတာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါမှ အလုပ်လုပ်မယ့်သူက ဘယ်အချိန် ဘာလုပ်မယ် အကွက်ချထားလို့ ရတာပေါ့။
လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံ ဆောက်မယ်တော့ ပြောပေမယ့် ဘယ်နည်းနဲ့ လျှပ်စစ်ထုတ်မှာလဲဆိုတာတော့ မပါဘူး။ ဒါလည်း လိုအပ် ပါတယ်။ Gas နဲ့ ထုတ်မှာလား၊ ရေအားနဲ့လား၊ ကျောက်မီးသွေးနဲ့လား အစရှိသဖြင့်ပေါ့။
မြန်မာနိုင်ငံက ဒို့အရေးတွေကြောင့် ရပ်ရပ်သွားတတ်တယ်လေ။
တွေးမိတာတော့ Gas ကနေ ထုတ်ယူမယ်လို့ ထင်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Gas က ၂၀၄၀ အထိ လုံလုံလောက်လောက်ထွက်ရဲ့လား ဆိုတာရယ် ၂၀၄၀ နောက်ပိုင်းမှာကော Gas က ဆက်ထွက်မှာလားဆိုတာရယ်ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့်သူတွေ ထည့်စဉ်းစားကြလိမ့်မယ်။
ပြောချင်တာက သတင်းအတိအကျနဲ့ သတင်းအချက်အလက် အပြည့်အစုံလိုအပ်တယ်။ ဒါတွေက တကယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့်သူတွေ ဂရုစိုက်တဲ့ ကိစ္စတွေဘဲ။ နိုင်ငံတကာမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေတွေကို တိကျတဲ့အချက်အလက်တွေ ထုတ်ပြန်ပေးဖို့လဲလိုတယ်။ အဲ့တော့ ဘဏ်တွေဘက်ကစပြီး ပြုပြင်ပေးနေပြီ။ ပြီးရင် အပေါ်ကပြောခဲ့သလိုဘဲ အသေအချာဆက်လုပ်ရမယ့် အရာတွေ ဆက်တိုက် ရှိနေသေးတယ်။
လုပ်တာမလုပ်တာကတော့ လုပ်ရမယ့် သူတွေ သဘောပါ။
နိုငျငံခွားဘဏျတှကေို Exporter တှအေတှကျ ဒျေါလာနဲ့ပါ ခြေးငှေ ခြေးခှငျ့ပေးဖို့ ဆောငျရှကျသလို Call Deposit တှကေိုလညျး တဈနှဈအတိုးနှုနျးကို ဇနျနဝါရီလ ၂ ရကျနကေ့နစေပွီး ၂ ရာခိုငျနှုနျးဘဲပေးတော့မယျဆိုတာ ဘဏျတှပေိုကျဆံကို အပွငျကို ပွနျထှကျအောငျ လုပျတာရဲ့ တဈစိတျတဈပိုငျးပဲ။
နိုငျငံမှာ စီးပှားရေး နှေးနရေငျ ဘဏျတိုးတှေ လြော့ခတြာ အမရေိကနျနိုငျငံ ဘဏျ ဥက်ကဌဟောငျး ဂရငျးစပနျး အသုံးခသြှားတဲ့နညျးဘဲ။ ဂရငျးစပနျးက အဲ့ဒီစနဈကို အခွခေံပွီး အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ ဘဏျစနဈတှကေို ပွောငျးလဲပွီး စီးပှားရေးကို ထိပျဆုံးအထိ ဆှဲတငျနိုငျ ခဲ့တယျ။
နိုငျငံစီးပှားရေး ကလြာရငျ သူဌေးတှေ အလုပျမလုပျတော့ဘူး။ ဘဏျထဲမှာ ပိုကျဆံအပျထားပွီး အတိုးဘဲ ထုတျစားနတေယျ။ အဲ့လို အခြိနျ မှာ ဘဏျတှကေ အတိုးနှုနျးကို သူဌေးတှဘေဏျမှာ ပိုကျဆံမအပျခငျြလောကျတဲ့အထိ ခပြဈရတယျ။ ဒါမှ သူဌေးက သူ့ပိုကျဆံကို ပွနျထုတျပွီး တဈနရောရာမှာ ရငျးနှီးမွှုပျနှံကွလိမျ့မယျ။
ငှကွေေးဖောငျးပှတာ မကောငျးသလို ငှကွေေးရှားပါးတာလဲ မကောငျးဘူး။ နိုငျငံမှာ ငှကွေေးလညျပတျမှု အရှိနျကောငျးနလေေ စီးပှားရေး ကောငျးလဘေဲ။ ဒါကွောငျ့ စီးပှားရေးမောငျးနှငျအားကောငျးအောငျ ငှကွေေးလညျပတျမှုတှေ ကောငျးနရေလိမျ့မယျ။ ပွညျသူတှေ လကျထဲမှာ ဝယျလိုအားတှေ၊ ပိုကျဆံတှေ ရှိနရေမယျ။
ဒီလို ငှကွေေးလညျပတျမှု အားကောငျးအောငျ အစိုးရ (တနညျး) ဗဟိုဘဏျ က ထိနျးကွောငျး ပေးနရေမှာ။ လိုအပျတဲ့ ငှကွေေး လညျပတျမှုထကျ ပိုနရေငျလညျး ဘဏျတိုးတှေ ပွနျမွှငျ့ပွီး ပိုကျဆံတှေ ဘဏျတှထေဲရောကျအောငျ တနညျးအားဖွငျ့ ငှကွေေး လညျပတျမှု နှေးသှားအောငျ ပွနျလုပျရတာဘဲ။
မွနျမာနိုငျငံက စီးပှားရေး နှေးကှေးသှားတာ ၂ နှဈလောကျရှိခဲ့ပွီ။ ခနျ့မှနျးရရငျ လကျရှိအစိုးရလကျထကျ သင်ျကွနျတှေ၊ အထပျမွငျ့တှေ၊ လုပျငနျးပွနျရုတျသိမျးတာတှေ နောကျပိုငျးကဆြငျးသှားတာ သတိထားမိတယျ။ ငှကွေေးလညျပတျအားကောငျးမယျ့ ကိစ်စတှကေို ဟနျ့တားလိုကျသလို ဖွဈစခေဲ့လို့ပါဘဲ။
အခု ပုဂ်ဂလိက ဘဏျတှကေနတေဆငျ့ ငှကွေေးတှကေို ပွညျသူတှလေကျထဲပွနျရောကျအောငျ စတငျဆောငျရှကျမယျလို့ ထငျမိတယျ။ ဗဟိုဘဏျကနေ ထုတျတဲ့ အမိနျ့မဟုတျဘဲ လုပျငနျးရှငျကွီးမြား အသငျးကနေ ထုတျတာဖွဈတော့ ရှတေို့း၊ နောကျဆုတျ လုပျရ လှယျအောငျ ဆောငျရှကျတဲ့သဘောမြိုး မွငျတယျ။
Call Deposit တဈမြိုးကိုဘဲ အတိုးနှုနျးလြော့ခတြာလညျး ထိရောကျမှုအားတော့ အမြားကွီး မဖွဈနိုငျသေးဘူး။ Saving Account ၊ Limited Account ၊ Loan Account တှကေ အစ လြော့ခပြေးဖို့တော့ လိုသေးတယျ။ ဒါလညျး တဆငျ့စီလာမယျလို့ မြှျောမှနျးပါတယျ။
နောကျတဈခုက လမျး၊ တံတား၊ လြှပျစဈ၊ ကြောငျး၊ ရုံး စတဲ့ အခွခေံအဆောကျအအုံ တညျဆောကျရေးအပိုငျးမှာ အစိုးရ တငျဒါ အောငျသော ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးရှငျတှကေို အာမခံပစ်စညျးမယူဘဲ အတိုး ၁၃ % နှုနျးနဲ့ CHD Bank က ခြေးငှေ ထုတျပေးမယျ ဆိုတယျ။
ဒါ နိုငျငံတကာက ကငျြ့သုံးနတေဲ့ Project Loan ပုံစံပါ။ ကွိုဆိုရပါမယျ။ CHD ဘဏျမှ မဟုတျပါဘူး။ ပုဂ်ဂလိက ဘဏျအားလုံး လိုကျလုပျဖို့ လိုပါတယျ။ ၁၃% အတိုး တဈခုနဲ့ တငျဒါအလုပျ အနညျးဆုံး ၁၀ ရာခိုငျနှုနျး ပွီးနရေမယျ ဆိုတာလေးဘဲ ပွောစရာရှိတယျ။ နောကျတော့ တဖွညျးဖွညျး ပုံစံပွောငျးလာမယျ ထငျပါတယျ။ တရုတျနိုငျငံ လငျြလငျြမွနျမွနျတိုးတကျသှားတာ အဲ့ဒီလို Project Loan တှကွေောငျ့ဘဲ။
အခုအခြိနျမှာ ရပျနတေဲ့ လုပျငနျးတှေ ပွနျလညျပတျနိုငျအောငျ အစိုးရက အားသှနျခှနျစိုကျလုပျပေးဖို့ လိုတယျ။ စီးပှားရေးကို နိုငျနိုငျ နငျးနငျး လုပျနိုငျလို့ နိုငျငံစီးပှားရေး ကောငျးလာရငျ စဈတိုကျဖို့ ဘယျသူမှ စိတျမဝငျစားတော့ဘူးဆိုတာ ခမျြးသာတဲ့ နိုငျငံတှကေို ကွညျ့ရငျ သိနိုငျပါတယျ။
ငွိမျးခမျြးရေး မရှိလို့ စီးပှားရေး မကောငျးဘူး။ စီးပှားရေး မကောငျးလို့ လကျနကျကိုငျရတယျဆိုပွီး ပေါကျပငျဘာကွောငျ့ ကိုငျးရတယျ ဇာတျလမျးရိုကျနတော အဖွမှေနျ မဟုတျပါဘူး။ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမယျ့သူတှကေ နယျစှနျနယျဖြားမှာ ရငျးနှီးကွဖို့ စိတျဝငျစားကွတာ မဟုတျဘူး။
စီးပှားရေးကောငျးနရေငျ အသကျက တနျဘိုးရှိလာတယျ။ ကမ်ဘာပျေါမှာ လူ့အသကျကို တနျဘိုးမထားဆုံး နိုငျငံတှကေလညျး အဆငျးရဲ ဆုံးနိုငျငံတှဘေဲ။ ခမျြးသာလာလလေေ သမှောကွောကျလလေေ၊ ဆငျးရဲလာလလေေ သမေထူးနမေထူး လို့ ခံယူလာလလေဘေဲ။ ဒီတော့ နိုငျငံစီးပှားရေး ကကောငျးနဖေို့ လုပျကို လုပျရပါမယျ။
အခုက စီးပှားရေးသမားတှေ လကျညှိုးအထိုးဆုံးက ဘဏျရယျ၊ ဥပဒတှေရေယျကိုဘဲ။ တဈလောက စီးပှားရေး စဈတမျးကောကျတော့ မွနျမာနိုငျငံကို ယုံကွညျမှုအဆငျ့တှေ လြော့ကလြာစတောက ဘာကွောငျးတှကွေောငျ့လဲလို့ မေးမွနျးတဲ့အခါ မမြှျောမှနျးနိုငျတဲ့ ဥပဒတှေေ ထှကျလာမှာကို ကွောကျလို့ဆိုတဲ့ အခကျြလဲပါတယျ။
ဒါ ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုရငျ စီးပှားရေး မူဝါဒ ခိုငျခိုငျမာမာမရှိသေးဘူးဆိုတာကို ပွတာဘဲ။ ဘယျလောကျအခွအေနမှောဖွဈဖွဈ လှတျတျောက ပယျခတြယျ၊ ရုတျသိမျးတယျ၊ ဖကျြသိမျးတယျဆိုတဲ့ ဥပဒကေဲ့သို့ အာဏာတညျသော အမိနျ့တှေ ထှကျလာမှာကို ကွောကျကွတာဘဲ။ အဲ့ဒီလို ကွောကျနအေောငျ မွနျမာနိုငျငံက ကောငျးကောငျးပွသပေးခဲ့တာ လကျရှိအခြိနျထိဘဲဆိုတာ လှတျတျော အမတျတှေ ဆှေးနှေးကွ၊ အဆိုတငျကွရငျ သိနိုငျကွားနိုငျပါတယျ။ ပွနျသိမျးမယျဆိုတာတှေ မြားလှပါတယျ။
တှေးမိတာ ဒီ ၅ နှဈကတော့ ပွနျသိမျးတာနဲ့ဘဲ အခြိနျကုနျသှားမယျလို့ ယူဆတယျ။
ဒီလို ပွငျဆငျထားရငျလဲ နောကျတဈခြိနျအတှကျ အခွခေံ အုပျမွဈတှေ ခထြားဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ လြှပျစဈကို ဘယျကထုတျမယျ၊ ဘယျလို ထုတျမယျမြိုးပေ့ါ။ တဈနကေ့ ရနျကုနျမွို့ကို ၂၀၁၈ မှ ၂၀၄၀ ပွညျ့နှဈအထိ မဂ်ါဂဝပျ ၄၇၀၀ ထုတျလုပျနိုငျမယျ့ လြှပျစဈ ဓါတျအားပေး စကျရုံ စီမံကိနျး ၁၁ ခု ဆောငျရှကျဖို့ ပွငျဆငျနတေယျလို့ ဖတျလိုကျရတယျ။
ဒီလို Infrastructure တှကေို ပှငျ့လငျးမွငျသာအောငျနဲ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမယျ့သူတှေ တှကျခကျြလို့ ရအောငျ ထုတျပွနျပေးထားတာ ကောငျးပါတယျ။ ဒါမှ အလုပျလုပျမယျ့သူက ဘယျအခြိနျ ဘာလုပျမယျ အကှကျခထြားလို့ ရတာပေါ့။
လြှပျစဈဓါတျအားပေးစကျရုံ ဆောကျမယျတော့ ပွောပမေယျ့ ဘယျနညျးနဲ့ လြှပျစဈထုတျမှာလဲဆိုတာတော့ မပါဘူး။ ဒါလညျး လိုအပျ ပါတယျ။ Gas နဲ့ ထုတျမှာလား၊ ရအေားနဲ့လား၊ ကြောကျမီးသှေးနဲ့လား အစရှိသဖွငျ့ပေါ့။
မွနျမာနိုငျငံက ဒို့အရေးတှကွေောငျ့ ရပျရပျသှားတတျတယျလေ။
တှေးမိတာတော့ Gas ကနေ ထုတျယူမယျလို့ ထငျတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ Gas က ၂၀၄၀ အထိ လုံလုံလောကျလောကျထှကျရဲ့လား ဆိုတာရယျ ၂၀၄၀ နောကျပိုငျးမှာကော Gas က ဆကျထှကျမှာလားဆိုတာရယျကို ရငျးနှီးမွှုပျနှံမယျ့သူတှေ ထညျ့စဉျးစားကွလိမျ့မယျ။
ပွောခငျြတာက သတငျးအတိအကနြဲ့ သတငျးအခကျြအလကျ အပွညျ့အစုံလိုအပျတယျ။ ဒါတှကေ တကယျရငျးနှီးမွှုပျနှံမယျ့သူတှေ ဂရုစိုကျတဲ့ ကိစ်စတှဘေဲ။ နိုငျငံတကာမှာ အလုပျလုပျနတေဲ့လူတှတှေကေို တိကတြဲ့အခကျြအလကျတှေ ထုတျပွနျပေးဖို့လဲလိုတယျ။ အဲ့တော့ ဘဏျတှဘေကျကစပွီး ပွုပွငျပေးနပွေီ။ ပွီးရငျ အပျေါကပွောခဲ့သလိုဘဲ အသအေခြာဆကျလုပျရမယျ့ အရာတှေ ဆကျတိုကျ ရှိနသေေးတယျ။
လုပျတာမလုပျတာကတော့ လုပျရမယျ့ သူတှေ သဘောပါ။
Posted on January 7, 2018 Categories ဆောင်းပါး5 Comments on ဘဏ်နဲ့ အတူ ဆက်တိုက်လုပ်ရမယ့်အရာတွေ
USA Economic သတင်းများ၏ Forex Market အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု Deviation များ
Posted on January 7, 2018 Categories Forex Lesson19 Comments on USA Economic သတင်းများ၏ Forex Market အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု Deviation များ
Technical Analysis မှာ ပါဝင်သော အချို့သော major technical analysis tools
Technical Analysis မှာ ပါဝင်သော အချိူ့သော major technical analysis tools တွေကိုလည်း အခြေခံအားဖြင့် လေ့လာလိုက်ကြရအောင်..။
RSI ဟာ Up-moves ကနေ Down-moves တွေနဲ့ normalizes တွေရဲ့ Ratio ကို တွက်ထုတ် တိုင်းတာ ထား တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အညွန်းက တော့ 0-100 range တစ်ခု အနေနဲ့ ဖေါ်ပြပါတယ်။ အကယ်၍ RSI ဟာ 70 နှင့် အထက် မှာ ပြနေပြီ ဆိုပါက overbought (ဈေးကွက်မှာ မျှော်လင့်ထားသည်ထက်ပို၍ ဈေးနှုံးမြင့်တ က်နေပြီ ဆိုတဲ့ အခြေအနေ) ဖြစ်နေတယ်လို့ယူဆပါတယ်။ အကယ်၍ RSI ဟာ 30 နဲ့ အောက်မှာ ဖော်ပြနေ တယ် ဆိုပါက oversold (ဈေးကွက်မှာ မျှော်လင့်ထားသည်ထက် အောက်သို့ ဈေးနှုံးဟာ ပိုမို ကျဆင်းနေတဲ့ အခြေအနေတစ်ခ)ု ဖြစ်နေတဲ့signalတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ရမှာပါ။
ဒီ Indicator ကိုတော့ 0-100% scale တစ်ခု အပေါ်မှာ overvought/oversold အခြေအနေတွေ ဖြစ်ပေါ်လာမှု ကို ညွန်ပြရန် အသုံးပြုပါတယ်။ ဒီ technical momentum indicator ရဲ့ တွက်ထုတ်ပုံကို တော့ နောက် သီြး ခား post တစ်ခု အနေနဲ့ ဖော်ပြပါမယ်။ (ဒီမှာတော့ ယေဘုယျ ဖော်ပြပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။)
Period closing prices တွေဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကာလ အပိုင်းအခြားအတွင်း မှာ ပိုမြင့်တဲ့ အစိတ်အပိုင်း မှာ အာရုံစူးစိုက်လေ့ရှိကြပါတယ် ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ strong up trend တွေ အပေါ်မှာ တည်မှီပြီးတော့ ဒီ indicator ကို အခြေခံ တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ထို့အတူ အပြန်အလှန်အားဖြင့် Period closing pricesတွေဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကာလ အပိုင်းအခြားအတွင်း မှာ ပိုနိမ့်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းမှာ အာရုံစူးစိုက်လေ့ရှိကြပါ တယ်ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ Strong downtrend တွေအပေါ်မှာ တည်မှီပြီးတော့ လည်း ဒီ indicator ကို အခြေခံ တည်ဆောက်ထားပါသေးတယ်။ နားတွေ မျက်စေ့တွေ လည်သွားလောက်ပါပြီး အလွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီ indicator ဟာ Storng trend တွေရဲ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေကို တွက်ထုတ်ပေးတဲ့ သဘောပါပဲ။ Stochastic calculations တွေဟာ လိုင်း နှစ်လိုင်း ထုတ်လုပ်ပါတယ်။
%K နဲ့ %D ပါ။ သူတို့ဟာ chart ရဲ့ overbought/oversold areas တွေကို ညွန်ပြပါတယ်။ Stochastic lines တွေအကြား ခြားနားချက်နဲ့ underlying instrument တွေရဲ့ price action တွေဟာ powerful Trading signal တစ်ခုကို ပေးပါတယ်။
ဒီ indicator ကတော့ momentum lines နှစ်လိုင်း ပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်။ MACD line ဟာ moving averages ကို နှစ်ဆ မြှောက်ထားတဲ့ လိုင်းနှစ်လိုင်းရဲ့ ခြားနားမှုပါပဲ။ exponential moving averages of the difference ဖြစ်ပြီး signal or trigger line နဲ့ ပြပါတယ်။ အကယ်၍ MACD နဲ့ Trigger lines တွေ cross ဖြစ်ခဲ့လို့ ရှိရင် ဒါကို Trend direction ပြောင်းလဲ မှု တစ်ခု အတွက် ပြတဲ့ signal တစ်ခု ကဲ့သို့ ယူနိုင် ပါတယ်။
Fibonacci number ဆိုတာကတော့ number sequence တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (1,1,3,5,8,13,21,34,….) ဒါ ကို ဘယ်လို တည်ဆောက်ထားသလဲ ဆိုတော့ ပထမ+ဒုတိယ=တတိယ စသည်အားဖြင့် ဆက်လက် ပေါင်း သွားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ်တစ်ခုနဲ့ သူ့ထက် ဒုတိယ ပိုကြီးတဲ့ နံပါတ် တို့ရဲ့ အချိုး Ratio ဟာ 62%( အ တိကျ ဆိုသော် 61.8 % ) ပါပဲ။ ထင်ရှားတဲ့ Fibonacci retracement number ဖြစ်တဲ့အတွက် အသုံးပြုကြပါ တယ်။ 62% ရဲ့ ပြောင်းပြန်ဟာ 38% ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း Fibonacci retracement number အဖြစ် အ သုံးပြုကြပါသေးတယ်။
Fibonacci Expension လည်း ရှိပါသေးတယ်။
W.D. Gann ဆိုတာကတော့ ဈေးကွက်မှာ ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ နှင့်အထက် ကို အလုပ်လုပ်နေတဲ့ stock နှင့် commodity trader တယောက်ပါပဲ။ time/price equivalents လို့ သိထားတဲ့ price movement and time အကြားက ဆက်သွယ်ချက်တွေ အပေါ်မှာ အခြေခံတဲ့ trading instruments တွေကို ပိုမိုကောင်းမွန် တဲ့ နည်းစနစ်တွေအဖြစ် ရှာဖွေတွက်ထုတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ နည်းစနစ်တွေကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သူ့ရဲ့ ငွေကြေးဥ စ္စာတွေကို ရှာဖွေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Gann’s methods အတွက် နားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး။
သို့သော်လည်း အနှစ်ချုပ်ကို ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင် သူဟာ charts ထဲက angles တွေကို support and resistance areas တွေကို သတ်မှတ်ဖို့ရန် နဲ့ အနာဂတ် trend ပြောင်းလဲမယ့် အချိန်တွေကို ခန့်မှန်းရန် အ တွက် အသုံးပြုပါတယ်။ သူဟာ support and resistance areas တွေကို ခန့်မှန်းရန် charts တွေထဲက lines တွေကိုလည်း အသုံးပြုပါတယ်။
Technical Analysis မှာ ပါဝငျသော အခြိူ့သော major technical analysis tools တှကေိုလညျး အခွခေံအားဖွငျ့ လလေ့ာလိုကျကွရအောငျ..။
RSI ဟာ Up-moves ကနေ Down-moves တှနေဲ့ normalizes တှရေဲ့ Ratio ကို တှကျထုတျ တိုငျးတာ ထား တာ ဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့ အညှနျးက တော့ 0-100 range တဈခု အနနေဲ့ ဖျေါပွပါတယျ။ အကယျ၍ RSI ဟာ 70 နှငျ့ အထကျ မှာ ပွနပွေီ ဆိုပါက overbought (ဈေးကှကျမှာ မြှျောလငျ့ထားသညျထကျပို၍ ဈေးနှုံးမွငျ့တ ကျနပွေီ ဆိုတဲ့ အခွအေနေ) ဖွဈနတေယျလို့ယူဆပါတယျ။ အကယျ၍ RSI ဟာ 30 နဲ့ အောကျမှာ ဖျောပွနေ တယျ ဆိုပါက oversold (ဈေးကှကျမှာ မြှျောလငျ့ထားသညျထကျ အောကျသို့ ဈေးနှုံးဟာ ပိုမို ကဆြငျးနတေဲ့ အခွအေနတေဈခ)ု ဖွဈနတေဲ့signalတဈခုလို့သတျမှတျရမှာပါ။
ဒီ Indicator ကိုတော့ 0-100% scale တဈခု အပျေါမှာ overvought/oversold အခွအေနတှေေ ဖွဈပျေါလာမှု ကို ညှနျပွရနျ အသုံးပွုပါတယျ။ ဒီ technical momentum indicator ရဲ့ တှကျထုတျပုံကို တော့ နောကျ သီွး ခား post တဈခု အနနေဲ့ ဖျောပွပါမယျ။ (ဒီမှာတော့ ယဘေုယြ ဖျောပွပေးတာ ဖွဈပါတယျ။)
Period closing prices တှဟော သတျမှတျထားတဲ့ ကာလ အပိုငျးအခွားအတှငျး မှာ ပိုမွငျ့တဲ့ အစိတျအပိုငျး မှာ အာရုံစူးစိုကျလရှေိ့ကွပါတယျ ဆိုတဲ့ အခကျြနဲ့ strong up trend တှေ အပျေါမှာ တညျမှီပွီးတော့ ဒီ indicator ကို အခွခေံ တညျဆောကျထားပါတယျ။ ထို့အတူ အပွနျအလှနျအားဖွငျ့ Period closing pricesတှေဟာ သတျမှတျထားတဲ့ ကာလ အပိုငျးအခွားအတှငျး မှာ ပိုနိမျ့တဲ့ အစိတျအပိုငျးမှာ အာရုံစူးစိုကျလရှေိ့ကွပါ တယျဆိုတဲ့ အခကျြနဲ့ Strong downtrend တှအေပျေါမှာ တညျမှီပွီးတော့ လညျး ဒီ indicator ကို အခွခေံ တညျဆောကျထားပါသေးတယျ။ နားတှေ မကျြစတှေ့ေ လညျသှားလောကျပါပွီး အလှယျပွောရမယျဆိုရငျ ဒီ indicator ဟာ Storng trend တှရေဲ့ နောကျဆုံးအခွအေနကေို တှကျထုတျပေးတဲ့ သဘောပါပဲ။ Stochastic calculations တှဟော လိုငျး နှဈလိုငျး ထုတျလုပျပါတယျ။
%K နဲ့ %D ပါ။ သူတို့ဟာ chart ရဲ့ overbought/oversold areas တှကေို ညှနျပွပါတယျ။ Stochastic lines တှအေကွား ခွားနားခကျြနဲ့ underlying instrument တှရေဲ့ price action တှဟော powerful Trading signal တဈခုကို ပေးပါတယျ။
ဒီ indicator ကတော့ momentum lines နှဈလိုငျး ပါဝငျပတျသကျနပေါတယျ။ MACD line ဟာ moving averages ကို နှဈဆ မွှောကျထားတဲ့ လိုငျးနှဈလိုငျးရဲ့ ခွားနားမှုပါပဲ။ exponential moving averages of the difference ဖွဈပွီး signal or trigger line နဲ့ ပွပါတယျ။ အကယျ၍ MACD နဲ့ Trigger lines တှေ cross ဖွဈခဲ့လို့ ရှိရငျ ဒါကို Trend direction ပွောငျးလဲ မှု တဈခု အတှကျ ပွတဲ့ signal တဈခု ကဲ့သို့ ယူနိုငျ ပါတယျ။
Fibonacci number ဆိုတာကတော့ number sequence တဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ။ (1,1,3,5,8,13,21,34,….) ဒါ ကို ဘယျလို တညျဆောကျထားသလဲ ဆိုတော့ ပထမ+ဒုတိယ=တတိယ စသညျအားဖွငျ့ ဆကျလကျ ပေါငျး သှားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ နံပါတျတဈခုနဲ့ သူ့ထကျ ဒုတိယ ပိုကွီးတဲ့ နံပါတျ တို့ရဲ့ အခြိုး Ratio ဟာ 62%( အ တိကြ ဆိုသျော 61.8 % ) ပါပဲ။ ထငျရှားတဲ့ Fibonacci retracement number ဖွဈတဲ့အတှကျ အသုံးပွုကွပါ တယျ။ 62% ရဲ့ ပွောငျးပွနျဟာ 38% ဖွဈပါတယျ။ ဒါကိုလညျး Fibonacci retracement number အဖွဈ အ သုံးပွုကွပါသေးတယျ။
Fibonacci Expension လညျး ရှိပါသေးတယျ။
W.D. Gann ဆိုတာကတော့ ဈေးကှကျမှာ ဒျေါလာ သနျး ၅၀ နှငျ့အထကျ ကို အလုပျလုပျနတေဲ့ stock နှငျ့ commodity trader တယောကျပါပဲ။ time/price equivalents လို့ သိထားတဲ့ price movement and time အကွားက ဆကျသှယျခကျြတှေ အပျေါမှာ အခွခေံတဲ့ trading instruments တှကေို ပိုမိုကောငျးမှနျ တဲ့ နညျးစနဈတှအေဖွဈ ရှာဖှတှေကျထုတျပါတယျ။ အဲ့ဒီ နညျးစနဈတှကေို အသုံးပွုခွငျးဖွငျ့ သူ့ရဲ့ ငှကွေေးဥ စ်စာတှကေို ရှာဖှခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ Gann’s methods အတှကျ နားလညျအောငျရှငျးပွဖို့ မလှယျကူပါဘူး။
သို့သျောလညျး အနှဈခြုပျကို ဖျောပွရမယျဆိုရငျ သူဟာ charts ထဲက angles တှကေို support and resistance areas တှကေို သတျမှတျဖို့ရနျ နဲ့ အနာဂတျ trend ပွောငျးလဲမယျ့ အခြိနျတှကေို ခနျ့မှနျးရနျ အ တှကျ အသုံးပွုပါတယျ။ သူဟာ support and resistance areas တှကေို ခနျ့မှနျးရနျ charts တှထေဲက lines တှကေိုလညျး အသုံးပွုပါတယျ။
Posted on January 7, 2018 Categories Forex Lesson4 Comments on Technical Analysis မှာ ပါဝင်သော အချို့သော major technical analysis tools